အသက် ၂၃ - ရက်ပေါင်း ၁၀၀ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အသက် ၂၂ - ၆၅ ရက်
ဟေးလူတိုင်း! ငါဒီ site မှာအသစ်ပါ၊ ဒီဟာကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးရေးသွင်းခြင်းပါ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယအပတ် PMO မရှိသည့်အဆုံးသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၀ အရွယ်အမျိုးသားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည် porn / sex / orgasm ကိုစွဲလမ်းကြောင်းသဘောပေါက်လာသည်။ ဒါကတကယ့်ကိုတကယ့်ကိုစွဲမက်ဖွယ်စွဲလမ်းမှုတစ်ခုပါ။ မီဒီယာများ၊ စာအုပ်များ၊ အခြားသူများစသဖြင့်အရက်ယမကာသောက်သုံးခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုအနည်းဆုံးအရက်တစ်မျိုးကြားရသည်။
ငါနောက်ဆုံးတော့ငါဆင်းလှသောမိန်းမနှင့်အတူရှိ၏ရှိရာအမှတ်ရခဲ့ (သူမ၏အဘို့အဖြစ်ကောင်းနဲ့) ငါ့အဘို့ချည်းခဲ့ကြောင်းလိင်ခဲ့ခြင်းနှင့်မကြာမီပြီးနောက် porn ကိုကြည့်ဖို့ခိုင်မာတဲ့တတ်ပြီးခံစားရတယ်။ ငါဒါငါနောက်တဖန်မြင်သည်အထိမည်သည့်ညစ်ညမ်းမှာမကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တစ်ခုခုမှားသိတယ်။ ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေစတင်သောအခါ။ ငါဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေအများအပြားကွဲပြားအကောင့်အသံကိုငါကြားရပြီ; ငါ့ကို you..mine စို့ပြောပြပါရစေ !!! နောက်ထပ်ဒီစွဲလမ်း၏တနျခိုးထေူစေရန်, ငါတကယ်နာကျင်မှု, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, masturbate မှအိပ်မပျော်တိုးမြှင့်လိုအပ်သမျှသည်မည်သည့်အပျြောအပါးခံစားနိုင်စွမ်းလျော့နည်းသွားအပေါင်းတို့, porn မှငါ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆက်စပ်ခဲ့ခြင်းမရှိသတိရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ၏အသက်တာ၌သွားခဲ့ကြသည်သောအခြားအမှုအရာမှလက္ခဏာများစွပ်စွဲနှင့်ပေါ်မယ့်အတော်လေးအနည်းငယ်စိတ်ဖိစီးမှုအမှုအရာရှိသတည်း။
ငါတော်တော်ကောင်းကောင်းရူးသွား၏အဖြစ်, ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, ထိုဆက်ဆံရေးဟာမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ငါဆရာဝန်များထံသို့ သွား. , ကျုံ့နဲ့ကျွန်မရတယ်အားလုံးငါအကြာတွင်ကွာပစ်ချသောငါ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေအဘို့အဆေးပြားတစည်းခဲ့သည်။ ငါလက္ခဏာတွေကုသနောက်ခံပြဿနာကိုပျောက်ကင်းစေမယ့်မခံခဲ့ရကြောင်းသိသည်။ ငါသည်ဤအချိန်ကာလအတွင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း porn ကြည့်ရှုခဲ့ပေမယ့်အတွေ့အကြုံများကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်။ ယခုငါဖြစ်စဉ်လုံးဝသတိထားမိခဲ့တယ်, ငါ့စိုက်ထူ porn ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာဆင်းရဲကြတယ်ကြောင်း။ ငါသည်ငါ့အချိန်မတန်မီသုက်နှင့်လည်းနှောင့်နှေးသုက် (ဝတ္ထုကိုဗီဒီယိုပြီးနောက်ဝတ္ထုကိုဗီဒီယိုရှိနေသော်လည်းရောက်ရှိရန်ခက်ခဲဖြစ်ကြောင်းရှိသူများ) ၏သတိပြုမိဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါပယ် jacking ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ရှေ့မှာထိုင်လျက်လူမှာဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုခဲ့ရပြီးအဲဒါကိုလုံးဝငါ့ကိုအော့နှလုံးနာ။ ငါ porn တော့ဘူး။
ဒါမလုံလောက်ဘူး ကျွန်ုပ်သည်အလွန်မှန်ကန်သော ဦး နှောက်ရှိသူဖြစ်ပြီး porn သည်အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ငါ့ ဦး နှောက်အတွက်များစွာကွဲပြားသည်မဟုတ်။ အရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ် yourbrainonporn ဆိုဒ်ကိုငါရှာပြီးငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ခဲ့တယ်။ ငါထို့နောက် rebooting အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ။ အသက် ၁၅ နှစ်ကနေ ၁၆ နှစ်အထိသုတ်ရည်မပါဘဲရက်အနည်းငယ်လောက်မသွားဘူးလို့ထင်လို့ပါ။ ကျွန်တော် ၁၈ နှစ်ကတည်းကတစ်ရက်မှ ၁ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်အထိတက်ခဲ့ဖူးတယ်။
အကြှနျုပျ၏ reboot အတွေ့အကြုံယခုအချိန်အထိအလွန်ကောင်းစွာသွားသည်။ အခြားပြန်လည် rebootees များ၏ထောက်ခံချက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါမျှော်လင့်ထားရန်အဘယ်အရာကိုပိုပြီးငါသိ၏။ အကြှနျုပျ၏နံနက်စိုက်ထူပြန်ဖြစ်ကြသည်။ ၇ ရက်မှစပြီးလိင်အကြောင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်အလိုအလျောက်စိုက်ထူနိုင်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိဖို့နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အင်္ဂါရပ်တွေကိုကျွန်တော်သတိပြုမိပြီး၊ ငါ့စိတ်ထဲမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖယ်ထုတ်ရန်ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးယဉ်မှုများသည်ပိုမိုလက်တွေ့ကျရန်နှင့်၎င်းတွင်လေ့လာသူမဟုတ်ကြောင်းပါ ၀ င်သူဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ ငါအားကစားခန်းမမှာပိုမိုအားကောင်းလာပြီးစာဖတ်ခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းအပေါ်များစွာပိုမိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်လာသည်။ ငါအများစုအစိတ်အပိုင်းအတွက် TV ကိုကြည့်ရှုရပ်တန့်ခဲ့ကြ (7-D ကို Hotties များလွန်း) ။
ခင်ဗျားတကယ်ပြန်လုပ်မိတာကိုရပ်တန့်ချင်ရင်ငါ့အတွက်ဘာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါပြောမယ်။ ငါမုန်းသောညစ်ညမ်းသောစွဲသူများဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သောငါ၏သူငယ်ချင်းအချို့အားဤအရာကိုကျွန်ုပ်ပြောပြလိုက်သည်။ သင် PMO ကိုတိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာရုပ်ပုံ / ဗွီဒီယိုကိုသင့်စိတ်ထဲမှာညစ်ညမ်းပုံမဟုတ်ဘဲသင်ကိုယ်တိုင် porn ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ကွန်ပျူတာရှေ့မှာသင်၏ဒစ်ကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ထားသည့်မည်သည့်အရာကရှိနေသည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ထိုင်။ ဒူးထောက်ပါ၊ သင်၏မျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ သင်порноနှင့်အလွန်ငြီးငွေ့လာလိမ့်မည်၊ သင်သည်အခြားအရာတစ်ခုကိုလုပ်ရန်လိုလိမ့်မည်။ ငါသည်ညစ်ညမ်းသောစိတ်ကူးယဉ်မှုများနှင့်ဆက်လက်ရုန်းကန်နေရသော်လည်း၊ ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုခြင်းထဲသို့မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါ။ PMO ၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်လုံးဝဆန့်ကျင်နေသည်! ငါဟာလေ့လာသူမဟုတ်ဘဲငါပါ ၀ င်ဖြစ်မယ့်စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့သာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ချင်သည်။
အိုကေ။ ဒါဆိုယောက်ျားတွေမင်းတို့တစ်ကိုယ်ရေဘဝမှာမိန်းမတစ်ယောက်ဆီကနေ့ရက်ကိုရနိုင်ပုံမရ၊ ကတိသစ္စာပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရောက်နေတဲ့နေ့ကကမ္ဘာပေါ်ကမိန်းကလေးတိုင်းလိုချင်တာတစ်ခုလိုချင်ပုံရတယ်။ ငါဒီတစ်ခုတွက်ဖို့ရှည်လျားပြီးကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါ၌သီအိုရီများစွာရှိသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် PMO ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်အတူတူပင်စတင်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါညာဘက်နှင့် left ထွက် check လုပ်ထားရတဲ့နေပါတယ်! ၎င်း၏ crazy ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်သောပုံစံရှိပြီးကောင်းစွာတည်ဆောက်ထားသည့်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အမျိုးသားများနည်းတူအမျိုးသမီးများထံမှလုံလောက်သောအာရုံစိုက်မှုကိုရရန်ငါအမြဲတမ်းရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ ငါမှလွဲ။ ဟုတ်တယ်, ငါအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၌ရှိကြ၏အခါ။ ကောင်းပြီဒီမှာကောင်းသောသတင်း fellas ပါပဲ။ ငါပြောနိုင်တာကတော့ Mr. Winkie ကိုစာလုံးပေါင်းဖို့လွှတ်လိုက်ပြီးဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကြည့်ပါ။ ၎င်းကိုနားမလည်ပါ (တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုဉာဏ်အလင်းပေးနိုင်လိမ့်မည်) သို့သော်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါသည်! ဥပမာတစ်ခုအတွက်နောက်စာပိုဒ်ကိုကြည့်ပါ။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုအတွက်နောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်ယနေ့ (day16) သည် PMO နံပါတ် ၁ မှစပြီး၊ 3D 1D အမျိုးသမီးများအတွက်စစ်မှန်သောသဘာဝအလိုဆန္ဒနှင့်ခံစားချက်များကိုကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည့်ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်သောလုပ်ဆောင်မှုသည်အိပ်ရာမှထ။ ကျွန်ုပ်၏နေ့ကိုစ တင်၍ လိင်နှင့်ငါ့နံနက်ခင်းကျွန်ုပ်၏တစ်ဝက်တစ်နာရီတည်းခိုခြင်းအတွက်အသုံးမပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏နံနက်ပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာငါစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ရှိနှင့်ဤခေါက်သေလွန်သောသူတို့သည်မိန်းကလေးငါ့အနားမှာသွားလာ၏။ သူမကျွန်တော့်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးသူမရဲ့ဆံပင်ကိုဖြတ်ပြီးသူမကိုပြုံးပြလိုက်တယ်။ ငါလေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက်ငါ့မုန့်ညက်ကိုက်စားနေစဉ်ဒါဟာငါ့ကိုသတိထားမိလာတယ်။ ငါ့အသားကိုဝါးနေတုန်းငါပြုံးပြီးခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်။ သူမသည်နောက်ပိုင်းတွင်နောက်တဖန်လမ်းလျှောက်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်သူသည်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသောအသစ်ဖြစ်ပြီးသူမဆံပင်နှင့်ထပ်မံရှုပ်ထွေးကာခေါင်းကိုပြန်ပစ်လိုက်ခြင်းကြောင့်သူမသည်သူမ၏ထိပ်ဖျားကိုဗိုက်အောင့ ်၍ တက်လာစေခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောမာယာ !! ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာရှိသွေးအားလုံးသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းကျွန်ုပ်၏ပေါင်ခြံထဲသို့တစ်ဟုန်ထိုးစီးဆင်းသွားသည်နှင့်တူသည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးနှိုးဆွလာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ငါသည်ငါ့ခက်ရင်းခွ LOL ကျဆင်းသွား! အခုငါဒီမိန်းကလေးအသက်မပြည့်သေးဘူးဆိုတာသူမအလွယ်တကူသိနိုင်တယ် (သူကအထက်တန်းကျောင်းမှာသိသာထင်ရှားတဲ့ကောင်မလေးနဲ့အတူရှိနေတယ်) ဒါကြောင့်ငါမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါရုတ်တရက်ဆုတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုခုပေါ်လာကြောင်းမဟုတ်ဘဲ, ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့် LOL ထောင်ချဖို့သွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်ငါသူမ၏ချက်ချင်းအဲဒီမှာယူနိုင်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့, ယုံကြည်မှုခံစားခဲ့ရ! ဒါ့အပြင်ငါလုံးဝလိင်ကြင်နာမှုမရှိသော်လည်း PMO session တစ်ခုအပြီးခံစားမှုမှတ်မိထက်ဤအဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်ပိုမိုသက်သာခံစားရတယ်။ ကိုယ့်ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူရဲ၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ လုံးဝအလုပ်မလုပ်တော့ပါ၊ သို့သော်ယနေ့အထိတိုးတက်မှုအချို့ကိုနေ့တိုင်းပြသနေပါသည်။
အိုကေ။ ဒီည (၂၁) ညမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အံ့ဖွယ်အရာတစ်ခုအကြောင်းပြောပြရန်ကျွန်ုပ်သည်ပုံပြင်အသစ်တစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု / သီအိုရီများကိုကျွန်ုပ်လက်ရှိအခြေအနေသို့ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုစိတ်ကူးယဉ်ကိုရှာဖွေနေသည်။ ကျွန်ုပ်အဖို့၊ နောက်ဆုံးချည်မျှင်သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွန့်ပစ်ရန်ဖြတ်တောက်ရမည် ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းသည်ချည်အားလုံး၏အင်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်ပုံရသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ခြင်းကကျွန်တော့်အားနည်းသော ဦး နှောက်ကိုလှေပေါ်မှအသက်ကယ်လှေထဲသို့ပစ်ချသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ခြင်းကသူ့ကိုရေပေါ်မျော။ ရေထဲသို့ပစ်ချလိုက်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ငါစိတ်ကူးယဉ်စိတ်တွေပျောက်သွားတဲ့အခါငါ့ ဦး နှောက်က“ ဟေ့၊ ဘာလဲလူပဲ!” သွားနေသလိုခံစားရတယ် ငါ floaty ဆုတ်ခွာအဖြစ်။ ပြီးတော့နက်နဲတယ်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်သည်နေ့မှ ၁၆ ရက်မှယနေ့ (၂၁) ကြားကာလအတွင်းခံစားခဲ့ရသောအရာများဖြစ်သည်။ (၁၆) နေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ပုံပြင်သည်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းမတိုင်မီကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောနောက်ဆုံးကောင်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ စိတ်ကူးယဉ်မှုအဖြစ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တွင်ဤခံစားချက်ရှိသည်မှာကျွန်ုပ်သည်အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းကိုရရှိနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာကျွန်ုပ်သည်အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့်အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့်ပြောရန်ဖြစ်သည်။ သငျသညျရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားအဖြစ် ဦး နှောက်ကပို။ ပို။ တပ်မက်။ သတင်းကောင်းမှာ (စိတ်မရှည်သူများအတွက်မကောင်းသောသတင်း) သင်စိတ်ကူးယဉ်လမ်းကိုစွန့်လွှတ်ပြီးအဖြစ်မှန်ကိုနေရာမှန်သို့စတင်ခွင့်ပြုသည်နှင့်အမျှသင်၏စိတ်သည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုအထိခိုက်မခံဖြစ်လာသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ငါကဘာမျှမနှိုးဆွနေသည် (flatline) ပုံရသည်ဘယ်မှာအချိန်ကာလအတွင်းရရှိလာတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုစတင်လက်ခံခင်ကစိတ်ကူးယဉ်မှ sensitivity ကိုဆုံးရှုံးကြောင်းရှာတွေ့ပါ၏။ အလွန်ကြောက်စရာ ဒါပေမယ့်မကြောက်ဖို့! နောက်စာပိုဒ်ကိုကြည့်ပါ
ငါအံ့သြဖွယ်လှပသောအသိဉာဏ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူယနေ့ညချိတ်ဆက်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏အတိတ်ကာလကကျွန်ုပ်အားအမြဲတမ်းကြိုက်နှစ်သက်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းကြောင်းများမှာဘယ်တော့မျှထိုလမ်းတွင်မလျှောက်နိုင်ပါ။ သူမငါ့ကိုစာပို့သောအခါသူမသည်မနက်ဖြန်ည (ယနေ့ည) ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်တွေ့မြင်ချင်ကြောင်းစာပို့သောအခါကျွန်ုပ်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့သည်။ ငါ reboot မလုပ်ဘူး၊ ပိုဆိုးတာကငါ flatline မှာရှိနေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါနောက်တစ်နေ့နှင့်၎င်းအကြားတွင်အရေးကြီးသောစာမေးပွဲတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ထိုမိန်းကလေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာလုပ်ရမည်နည်းဟုတွေးမိသည်နှင့်ကျွန်ုပ်လုံးဝအိပ်မပျော်ခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့်အနားယူစရာမလို၊ ၄ နာရီစာမေးပွဲဖြေပြီးချက်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၈ နာရီမှာသူမနဲ့တွေ့ချင်ကြောင်းစာပို့ခဲ့တယ်။ ငါပြန်ဖွင့်ပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်အထိသူ့ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်တာဟာမတူဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်တယ်၊ အဲဒါကငါသိသမျှအားလုံးအတွက်နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း ၆၀ ကျော်။ ငါအခုသွားရမယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ငါပြုခဲ့ဝမ်းမြောက်မိပါတယ် sooooo ။ ညနေစာ၊ သောက်စရာအနည်းငယ်၊ ရေကူးကန်တွေရှိတယ်။ ပြီးတော့ငါတို့ကားနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးထုတ်လုပ်ကြတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့အဲဒီမှာဘာမှမခံစားဘဲနေပေမယ့်နွေးထွေးမှုနဲ့သွေးစီးဆင်းမှုတိုးပွားလာခြင်း။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွခြင်းနှင့်လုံးဝထဲသို့ဝင်ခြင်းသည်ထူးဆန်းသော်လည်းစိုက်ထူခြင်းမရှိပါ။ နောက်ဆုံးတော့ငါထင်တာကတော့ငါတို့အားလုံးကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စရာပါပဲ။ ဒါက shitty အခိုက်ပဲ! ဒါပေမယ့်ဒီနေရာကအားလုံးလှည့်ဘယ်မှာ။ ဒီနေရာမှာငါဒီလိုစဉ်းစားမိတယ် -“ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ၊ ငါ BS ကိုဆင်ခြေပေးပြီးညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှု၊ rebooting နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုလုံးအကြောင်းပြောပြပြီးသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းမှု၊ ။ " ဒါကြောင့်ခဏစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုအမှန်တရားပြောပြလိုက်တယ်။ သူမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ဦး နှောက်အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုသူအလွန်သဘောပေါက်ခဲ့သည် (အံ့သြလောက်အောင် meeeeowww) ။ ငါကအဲဒါကိုနှေးနှေးအောင်လုပ်ရမယ်၊ ငါ reboot မလုပ်မချင်းတစ်လျှောက်လုံးသွားဖို့မသင့်တော်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်လိင်၊ ချစ်ခြင်း၊ ၀ ိညာဉ်ရေးရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းအလွန်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောစကားပြောဆိုမှုကိုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်တဖန်ထွက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ အမှုအရာတွေပိုပူလာပြီးသူမငါ့ကိုပွတ်တိုက်လာတာနဲ့အမျှနောက်ဆုံးတော့ငါဟာခက်ခဲလာတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒါမှမဟုတ်ဘာမှမထိခဲ့ဘူး ကျနော်တို့4နာရီထွက်အောင်ခဲ့ကြရပေမည်။ ဒါဟာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကအများစုအစိတ်အပိုင်းအတွက်သန့်ရှင်းစွာထားရှိမည် - အဘယ်သူမျှမဘောင်းဘီသို့မသွား။ သူမသည်လည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံးအစစ်အမှန်ဆက်သွယ်မှုခံစားရတယ်။ ငါတကယ်ဒီမိန်းကလေးကိုတကယ်ကြိုက်တယ်။ နေ့က ၁၅ ရက်မှာကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကကျွန်တော့်ကိုစက္ကန့် ၂၀ လောက်စိုက်ထူနိုင်ပေမယ့်တကယ်ကိုမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ရဖို့ ၁၅ မိနစ်လိုအချိန်ယူခဲ့တယ်။ ဤအရာသည်မျိုးဆက်ပွားမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏စိတ်ကူးယဉ်နှင့်တကယ့်အရာတို့အကြားကြီးမားသောကွာခြားချက်ရှိသည်ကိုပြသပြီးကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အဝပြန်လည်မတက်ကြွသေးကြောင်းပြသသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သော်လည်း Flatline သည်အကြွင်းမဲ့မဟုတ်ကြောင်းလည်းပြသသည်။ ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပြီးနောက်ငါစိတ်ကူးယဉ်လို့မခံစားရဘူး။ ငါသူမနောက်တစ်ခါပြန်တွေ့သည်အထိစောင့်ချင်သည်။
ငါသော်လည်းမေးခွန်းတစ်ခုကိုလုပ်ပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းကမကောင်းတာလား၊ ငါမထွက်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းကအားအင်ပြည့် ၀ စွာထွက်လာသည်။ ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုအာရုံမစိုက်နိုင်ဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့လက်ကိုနမ်းတာကနေသူမရဲ့ကွေးကောက်တာကိုကြည့်ခြင်းကနေစိုက်ထူနိုင်တာကိုငါသိတယ်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤဝါကျကိုရေးနေစဉ်၊ ၃ နာရီခန့်အကြာတွင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ငရဲမှနာကျင်နေသောအပြာရောင်ဘောလုံးများကိုရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ reboot ၏စည်းမျဉ်းများအရဤဖိအားကိုလျှော့ချရန်ကျွန်ုပ်နည်းလမ်းမရှိသေးပါ။ ငါ့ရဲ့ဆီးကျိတ်က ဦး လေးကိုငိုနေသလိုခံစားရတယ်။ ဘယ်လောက်ဝေးလဲ? ဘယ်လောက်များများလဲ? ငါနဲ့အတူနှေးစေချင်တဲ့လှပတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုငါတွေ့ပြီ။ သူက rebooting ကိုလုံးဝနားလည်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံချင်ဘူး။
ကောင်းပြီလူတိုင်း။ မင်းရဲ့နောက်ဆုံးစာမူကိုမင်းဖတ်ရင်မင်းကငါဟာတကယ့်ကိုလှပတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတာသိတယ်။ သူကနှေးနှေးကွေးလေးနေချင်တယ်၊ ပြီးတော့ငါ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုပြန်ကောင်းလာအောင်သတိထားနေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသောအရာများနှင့်မတူဘဲနက်ရှိုင်းသောဝိညာဉ်ရေးဆက်သွယ်မှုရှိပုံရပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဖုန်းရောက်နေချိန်တွင်မမျှော်လင့်ဘဲဖွင့်ထားခြင်းခံရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးပထမဆုံးနေ့ရက်ဖြစ်သည့်တစ်ရက်တည်းတွင်သာရှိသည်။ မနက်ဖြန်အချင်းချင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သွားတွေ့တော့မယ် သူမကငါနဲ့အတူ ၂၅ နာရီလောက်ဝေးတဲ့နေရာကနေအိမ်ကိုကြည့်ဖို့ပြောင်းရွှေ့မယ့်မြို့ကိုသွားနေတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးနေ့ရက်သည်လွန်ခဲ့သောသုံးရက်ကဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သိကျွမ်းခဲ့ကြပြီးကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးပို့စ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ပြင်းထန်သောမိတ်ကပ်အစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအဟုတ်, Marnia, သင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၌ဤအချက်မှာငါ့အဘို့ဝေးလွန်းသွားပြီကြောင့်သင်ကလုံးဝမှန်ကန်ခဲ့ကြသည် (သူမ၏ယောက်ျားတွေနားထောင်ပါ, သူမဖြစ်ပျက်ကိုသိ!) ။ ငါသာလာမည့်2ရက်ကြာကြာတဲ့ရက်နာသူအဖြစ်ဖော်ပြရန်နိုင်သောအရာကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ငါသက်သာလာပြီ၊ ငါ့နံနက်စိုက်ထူခြင်းပြန်ရောက်လာပြီ။ ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမြင်ယောင်လာသည်။ သို့သော် ၁၀ စက္ကန့်နိုးပြီးနောက်နိုးထသည့် ဦး နှောက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့်နိုးထလာသည့်အလျင်အမြန်နံနက်စိုက်ခင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ။
နောက်ဆုံးတော့ငါ့ ဦး နှောက်ကနှိုးဆွခြင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းများကိုခွဲခြားရန်စတင်လာခဲ့ပြီးအဲဒါဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ငါထင်တယ်။ ငါတွေ့မြင်နေတဲ့ဒီမိန်းမထဲငါရောက်နေတယ်၊ ​​ငါကနေ့တိုင်းမြင်နေတဲ့တခြားအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကိုစိတ်ကူးမကြည့်မိဖို့ကူညီနေတယ်။ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေသူနှင့်သူနှင့်အချိန်ဖြုန်းနေသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းလိုအပ်မှုနည်းလွန်းသည်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ဒီတော့ဒီနေ့မှာငါဟာအနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်တွေတောက်ပနေတဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ libido အတွေ့အကြုံနှစ်ခုရှိတယ်။ ပထမ ဦး စွာငါဘဏ်သို့သွား။ နှင့် Teller အလွန်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသူမ၏ပုံစံကိုပေးပြီးသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ရှုရန်နီးကပ်လာသည့်အခါကျွန်ုပ်၏လိင်တံသို့သွေးစီးဆင်းမှုနှင့်ခေါင်းခေါင်း၌တောက်ပနေသည့်ခံစားမှုရှိခဲ့သည်။ ဤသည်ချက်ချင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မရှိဘဲဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါကအခြားအတွေးမပေးခဲ့ပါဘူး ငါအိမ်ပြန်ရောက်တော့အဲဒီလိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ သူမရဲ့ခွေးကိုလမ်းလျှောက်ဖို့စတိုတိုဘောင်းဘီတိုနဲ့လှပတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုငါတွေ့လိုက်ရတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်ရုံသဘာဝအလိုအလျောက်နှိုးဆွခြင်းမရှိပါ။ ရုပ်ရှင်မှာလိင်ဆက်ဆံတာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သူတို့နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုကြည့်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်ငါ့မျက်လုံးနဲ့ဒါမှမဟုတ်တခြားအရာတွေနဲ့အဝတ်မခြုံဘဲဒီမိန်းမတွေထဲကတစ်ယောက်မှငါမမြင်ခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံးမှာတော့စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်နှိုးဆွခြင်းတို့သည်ငါ့ ဦး နှောက်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်၎င်းတို့သည်သီးသန့်ချိတ်ဆက်ရန်မလိုပါ။ အဆိုပါနှိုးဆော်သံရုံအလိုအလျောက်ဖြစ်ပျက်နှင့်ငါတို့လုပ်ပုံကိုပါပဲ။ တီဗွီမှာလိင်မြင်ကွင်းတစ်ခုတစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့သူ၊ ဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်မှာညစ်ညမ်းတဲ့သူ၊ သူဘယ်သွားသွားနေရာတိုင်းမှာအတုအယောင်လိင်စိတ်ဆန်တဲ့လိင်အင်္ဂါတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမရှိသူ၊ အစစ်အမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ။
ကောင်းမြတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည် - ယောက်ျားများသည် Porn မလိုအပ်ပါ။ အမျိုးသားများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမလိုအပ်ပါ။ ယောက်ျားများသည်လိင်စိတ်ကူးယဉ်တောင်မလိုအပ်ပါ။ အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများသာလိုအပ်သည်။ စိတ်ကူးယဉ်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ထိခိုက်သည်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်ုပ်မသိပါ။ အချို့လူများအတွက်ကျန်းမာရေးကောင်းနိုင်သည် ငါသိသမျှအားလုံးသည်ပြုံးနေခြင်းအတွက်၎င်းမှကျွန်ုပ်၏လွတ်လပ်မှုကိုခံစားနေရခြင်းဖြစ်သည်။ တရားဝင်သည်နေ့ ၂၅ နေ့မဟုတ် PMO နှင့် ၁ အောင်မြင်သောနံပါတ် F. ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမ PMO ယခုအချိန်အထိနေချိန်မှာတန်ဖိုးရှိခဲ့သနညျး ရလဒ်က rewiring နှင့်မွေးရာပါဟာအတက်အကျနှင့်အတူဆက်လက်ကတန်ဖိုးရှိအောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဂတိတော်ကိုပြဖူးသလော ဒီ BS အပေါငျးတို့သတစည်းဖြစ်သနည်း ကိုယ့်ငါပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပုံမှန်တစ်အသိခံစားရရန် porn လိုအပ်သောအယူအဆအတွက်ပေးသငျ့သလော ငါနောက်ကျောတစ်ဦးခြေလှမ်းယူနှင့်ကွန်ကရစ်ကိုကြည့်မယ်လို့နေသေးတယ်ဒီမေးခွန်းတွေကိုကျွန်မစတင်ကတည်းကဘဝမှာပြောင်းလဲပြီကြောင်းတိုင်းတာမှုအရာတို့ကိုဖြေဆိုရန်။ ဤတွင်သူတို့နေသောခေါင်းစဉ်:
ငါ၏အဘုတ်အဖွဲ့စာမေးပွဲသုံးခုစလုံး, ပထမဦးဆုံးပါအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီ (များသောလူများဤသို့ပြုနိုင်သည်) လွန်
နေရာတိုင်းအမျိုးသမီးအပေါ် macked တဲ့
ငါ၏အ cardio တိုးတက်
နံနက် / ညစိုက်ထူ - စစ်ဆေးပါ
သည်အခြားအလိုအလျောက်စိုက်ထူ - စစ်ဆေးပါ
ဂျီ ... မသိဘူး
ဟုတ်တယ်၊ ငါမကောင်းတဲ့နေ့တွေကြုံခဲ့ရပြီးလာမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါပြားနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြပြီ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်၏အမှိုက်သည်ထိတ်ထိတ်ထိတ်လန့်စွာထိတ်လန့်သွားမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည့်အချိန်များရှိခဲ့သည်။ သို့သော်အဖြစ်မှန်များကသူတို့ကိုယ်သူတို့ပြောဆိုကြသည်။ ဒါကငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲနေတယ်။ porn သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်ပါ၊ ၎င်းကိုနောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှပျော်ရွှင်စွာမကြည့်နိုင်ပါ။ ငါ PMO မရှိရက်ပေါင်း 90 အပြည့်အဝလုပ်ချင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အနည်းငယ်ရှည်လျားလိမ့်မည်၊ သို့သော် M သို့မသွားမီသို့မဟုတ် O. သေချာပေါက် flashbacks များနှင့်ဆက်ဆံနေရခြင်း၊
Day 32 - အော်ဂဇင်
ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်သော reboot ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားသည် မနေ့ကဘာပဲအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ငါသည်အနိမ့်ကြင်နာခံစားခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်မှာမနက်ခင်းထင်းမရှိ၊ ငါမူကား၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုညတွင်ခြောက်သွေ့သောရာသီဥတုကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့သည်။ ရှည်လျားသောနေ့ကိုလွှတ်ပေးခြင်းမရှိဘဲအော်ဂဇင်မပေးဘဲ ၃၂ ရက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ငါ့ကိုအိုထဲသို့မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်စေခဲ့သည်။ WTF! ခြောက်သွေ့တဲ့တောင်ပေါ်ကနေကျွန်တော်အရင်ကမဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး၊ ဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါငါအပြည့်အဝစိုက်ထူခဲ့တယ်ဆိုတာတောင်မှမသိဘူး။ ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာတစ်နေ့လုံးလိင်ဆက်ဆံတယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။
ငါနောက်မှကြောက်မက်ဘွယ်သောခံစားရတယ်ငါနောက်ဆုံးညဥ့်အိပ်မပျော်ခဲ့သည်။ ဒီမနက်မှာနေလို့မကောင်းဘူး ငါစိတ်ဓာတ်ကျပြီးဘဝရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုပဲအာရုံစိုက်ပုံရတယ်။ ငါ့ ဦး နှောက်က O. အတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး။ ငါလုပ်ဖို့မရည်ရွယ်ခဲ့ဘူး။ အိုအိုကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်သိပ်မကြာခင်မှာပဲငါနေမကောင်းဖြစ်လာတယ်။ ငါ့ ဦး နှောက်စာသားကြော်ဖြစ်ပါတယ်တူသောငါခံစား! ဒီဆက်ဆံရေးဟာကောင်းပါတယ်၊ ငါအရမ်းခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုလွှတ်လိုက်တော့မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒီမိန်းကလေးနဲ့စာပို့တာ၊ ဖုန်းပြောဆိုတာတွေကတဆင့်သူမနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာထက်ပိုမြန်ဆန်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကူးယဉ်တွေကိုငါ့စိတ်ထဲမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာငါသိလိုက်ရတယ်။ ကျွန်ုပ်အကောင်းဆုံးခန့်မှန်းချက်မှာကျွန်ုပ်တည်ဆောက်နေသည့်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းအသစ်သည်ဤကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုကိုင်တွယ်ရန်မလုံလောက်သေးပါ။ ငါ reboot နှင့်အတူဆက်လုပ်ရန်စီစဉ်ထားခြင်းနှင့်ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ပြင်းထန်မှုကိုပြန် dial ရပါလိမ့်မယ်။ လွန်ခဲ့သော ၃၂ ရက် PMO မှရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်အချည်းနှီးဖြစ်ခဲ့ပြီဟုမထင်ပါ။ ယနေ့ငါ ၃၂-၁ အဖြစ်ရှုမြင်ရမည်။ ကျွန်တော်ဒီနေ့ရက် ၉၀ ဖြစ်စေအနည်းဆုံး ၁ ရက်ဖြစ်စေလုပ်ချင်တယ်။
(နောက်နေ့) ဒီနေ့ငါဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြောက်လန့်နေရတာလဲ၊ အိုနောက်တစ်ရက်အကြာမှာငါဟာ“ အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုရှာတွေ့” ခံစားချက်ရလာပြီ။
(ထိုနောက်မှတစ်ရက်) နောက်ဆုံး ၂ ရက်တာကာလတွင်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်သက်သာမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ရန်ခက်ခဲခြင်းတို့အတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုနိမ့်ကျသည်။ ငါစာသား "ကြော်" ခံစားရသည်။ နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုမှာဤရှည်လျားသောရာထူးအတွက်ကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းဤခံစားချက်ကိုခံစားရပါလိမ့်မည်။ အိုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်မျှတမှုပြန်လည်ရရှိသောအခါဤပြောင်းလဲမှုရှိပါသလား။
(နောက်နေ့) ငါမြင်နေရတဲ့မိန်းကလေးဟာလည်းပျော်စရာကောင်းတယ်။ မနေ့ညကငါတို့စကားပြောခဲ့ပြီးသူမကသူမစိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါရှိပြီးအလွန်စိတ်ဓာတ်ကျနေသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ သူမသည်သူမအနေဖြင့်ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယရှိနေသည်ဟုဆိုသော်လည်း၊ ဝေးလံသောအကွာအဝေးသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်မြို့သစ်တွင်အလုပ်သစ်တစ်ခုစတင်ရန်ဝေးဝေးသို့လှည့်ထွက်သွားခဲ့သည် ငါလည်းသံသယဝင်တယ်၊ ပြီးတော့သူလည်းသူမကိုပြောပြဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ငါထင်ခဲ့တယ်။
ဒီဟာကကျွန်တော့်ကိုသိပ်ပြီးမလာစေချင်ဘူး။ သူမသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခဏတာအတူတကွရှိခဲ့ကြပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်ဆံရေး၏သီးသန့်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်များကိုအလျင်အမြန်ပြေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါမသေချာမရေရာနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ခဲယဉ်းအချိန်ရှိခြင်းဖြစ်၏။ အခုဘယ်လို reboot လုပ်မှာလဲ။ ငါကအခြားမိန်းကလေးများနှင့်ပရောပရည်လုပ်သလား။ ကျနော်တို့လက်ထပ်သို့မဟုတ်စေ့စပ်ကြသည်မဟုတ်။ ဘာလို့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဒီလောက်ခက်ခဲအောင်လုပ်ရတာလဲ။ ငါအပန်းဖြေရုံအမှုအရာတလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားဖွစျလာမညျကိုဘယ်လိုကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ - ငါ reboot လုပ်ပြီး rewire လုပ်ရမယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပန်းတိုင်များရှေ့တွင်ထားခြင်းကဤမုန်တိုင်းကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ ငါ့စိတ်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ပြီးစိတ်ငြိမ်အောင်မကြိုးစားခဲ့ဘူး။ ငါအရမ်းကြောက်တယ် ငါ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေတာလဲ မှတ်မိဖို့လိုသည်မှာဤမိန်းမနှင့်မတွေ့မီကျွန်ုပ်၏ reboot အလွန်ကောင်းသည်ကိုသတိရရန်လိုသည်။ ငါသူမကိုတွေ့တဲ့အချိန်အထိအခြေအနေတွေကပိုကောင်းလာပေမဲ့သူမမရှိဘဲငါခရီးကိုပြန်လို့မရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ ငါဆက်ဆံရေးကိုစွန့်လွှတ်တော့မည်ဟုငါမပြော။ ငါပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၏အောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်ရှုံးနိမ့်မှုသည်ဤဆက်နွယ်မှုများပေါ် မူတည်၍ မမှီခိုရန်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
ယခုကျွန်ုပ်၏ချစ်သူဟောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းများသာဖြစ်သည်။ သူမကကျွန်မကိုအကြံဥာဏ်ပေးရန်အကြံပေးသော်လည်းသူမကကျွန်မကိုစဉ်းစားမိသော်လည်းဘာမှမပြောရန်ကိုရှောင်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ နေ့ (၃၂) တွင် Orgasm သည်ပြင်းထန်သောခံစားချက်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေပြီးပြင်းထန်သော chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးငါသိသလောက် (Porn စွဲဆေး PE ၏လက္ခဏာ) အထိတည့်တည့်တွင်စိုက်ထူခဲ့သည်။ ဆက်ဆံရေးဟာ reboot များအတွက်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောတွန်းအားဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှုတွေအများကြီးရတယ်, ဒါပေမယ့်ငါသည်လည်းသူမနှင့်အတူ porn type ကိုစိတ်ကူးယဉ်များစွာရှိသည်နှင့်သူတို့အားအစစ်အမှန်ထက်ပိုမိုနှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လေ့ရှိရာအချက်မှာနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်စိတ်ကူးယဉ်သည်ကျွန်ုပ်အပေါ်လွှမ်းမိုးမှုတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေပြီး၊ အကယ်၍သာ ခရီးသွားခြင်းသည်ဆက်လက်ခရီးသွားနေ ဦး မည်ဆိုလျှင်၊
ဘောဇဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘောလုံးဂိမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ် roller Coaster အကြောင်းကို fantasize ဖို့ရှိပါတယ်ထက်လိင်အကြောင်းကို fantasize မှမပိုအကြောင်းပြချက်ရှိပါသည်။ သူတို့ဖြစ်ပျက်သည့်အခါသင်ရုံသူတို့ကိုပျော်မွေ့။ ကျွန်မမကြာခဏယဉျငါ့အဘို့မိုးသည်းထန်စွာ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏လက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်ထင်ပါတယ်။ ၎င်း၏တစ်ဦးအပေါ်ထားခဲ့တယ်။ ရုံစိတ်ပျက်လာပြီ။ ငါသည်ငါ့စိုက်ထူနေတုန်းပဲသူတို့လိင်ရက်ပေါင်းများအတွက် porn / လက်စွဲစာအုပ်ဆွရှိကြ၏သကဲ့သို့အထင်ကြီးနေကြသည်မဟုတ်ကိုသိပေမယ့်ကိုယ့်နောက်ဆုံးမှာသဘာဝနှင့်ငါ၏မျိုးရိုးဗီဇကိုကျော်လွှားမည်ကိုသစ္စာစောင့်သောဖြစ်ကြောင်းကို!
ငါကပိုယခုအချိန်တွင်ခဲ့ကြပြီးနေ့စဉ်အမှုအရာလုပ်နေတာကနေတိုးမြှင့်အပျော်အပါးကြုံနေရပါပြီနေ့ကိုတလျှောက်လုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်၏သွားလာရင်းပါစေသကဲ့သို့သတိပြုမိပါပွီ။ Plus အား, ချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းသမီးနှင့်အတူမျက်လုံးချင်း (အထူးသဖြင့်နှစ်ဆကြာ) ငါ့အားအထူးသဖြင့် yummy ဖြစ်လာနေသည်။ ငါအလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်လက်ခံဖြစ်ခြင်းကြောင်းခံစားရသောအခါ, ရှင်းပြဖို့ခဲယဉ်းကြောင်းငါ့ကိုအမှီဒီအလုအယက်ပေးပို့သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားပထမလူတစ် ဦး အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိခြင်းသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသင်အားလုံးကိုအသိပေးလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သည်မှာစိုးရိမ်စရာဘာမှမရှိပါ။ နေ့ (၃၂) တွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ကျွန်ုပ်အိုသို့ကူးပြောင်းခြင်းအကြောင်း blog ရေးသားပြီးဖြစ်သည်။ ငါ rewiring အတွက်အရမ်းစောလွန်းပေမယ့်ငါကဒါကြောင့်အကောင်းတစ် ဦး အတှေ့အကွုံခဲ့ဘယ်လိုဆွေးနွေးကြသည်။ ငါကသူကငါ့ကိုပြန် reboot ပြန်ထားပုံကိုဘယ်လိုစိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့်တစ် ဦး ယုတ် - မြည်းကို chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ယူဆောင်ဘယ်လိုဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။ ဒါပေမယ့်ငါသုက်ပိုး၏အရည်အသွေးတစ်ခု - သုတ်ရည်လွှတ်၏အရည်အသွေးဆွေးနွေးတင်ပြကြပြီမဟုတ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏ cum သည်ထူထပ်၊ ပေါများခြင်းနှင့်နွေးထွေးခြင်း (ပူပြင်းလွန်းခြင်း) ရှိသည်ဟုဘယ်တော့မှမခံစားခဲ့ပါ။ အဲဒီမှာတစ်တန်ရှိခဲ့သည် - ငါစိမ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ - ၃၂ ရက် O မပါ ၀ င်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏သုက်ပိုးအရေအတွက်စစ်ဆေးရန်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်လုပ်ခြင်း မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်၏ PMO အပေါင်းအသင်းအားလုံးသည်သင်၏ဆီးကျိတ်နှင့် ၀ တ်မှုန်များသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နေကြောင်းပြန်လည်အာမခံနိုင်သည်။ အဆိုပါပြproblemနာကို ဦး နှောက်ထဲမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်မရဲ့အမှိုက်ဟာတစ်နေ့ကို ၂-၄ အော်ဂဇင်နှစ်နဲ့နှစ်အကြာမှာကာလကြာရှည်စွာအနားယူဖို့လိုနေပြီလို့ကျွန်မခံစားရတယ်။ အိုးငါ lol ဖြုန်းတီးသောသုက်ပိုး!
ယခုတွင်ငါသည်ဒုတိယ flatline ကိုတွေ့ကြုံခံစားလာရပြီ၊ ဖြစ်နိုင်သည်ထက် ပို၍ မှန်ကန်သော flatline အရငါ reboot ၌အစောပိုင်းက rebido ပြန်ပေါ်လာသည့် libido ခံစားချက်ဟုထင်မြင်သည့်အရာကသာဤသို့သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ဒါက 3D ရှိအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများအား sensitivity ကိုပြန်ပေးတဲ့အရောအနှောရော၊ ငါ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာ porn-laced fantasies (အပြာများကိုအမှန်တကယ်မကြည့်ပဲ masturbate လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့သောအရာများ) ၏ပြန်လည်ခံစားချက်ရောနှောပေါင်းစပ်ခြင်းလို့ထင်ပါတယ်။ ယခုငါစိတ်ကူးယဉ်ကန်နှင့်အခြား flatline ကြုံတွေ့နေပါတယ်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုအရအမှန်တကယ်တွင်အခြေစိုက်ထားသောစစ်မှန်သောလိင်စိတ်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအားလုံး (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအများစု) ကိုပြန်လည်တောင်းဆိုရန်လာသည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ ဒါပေမဲ့ဒါကကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ အသက် ၄ နှစ်အရွယ်လောက်ကတည်းကရုပ်ရှင်တွေမှာလိင်ကိစ္စနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ခဲ့တယ် ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိသောကြောင့်စိတ်ကူးယဉ်သည်“ ညစ်ညမ်းမှု” မဖြစ်ပေါ်ဘဲကျွန်ုပ်၏ libido ၏အဓိကအပိုင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ဒီတော့ဒီဟာရိုင်းသွားမှာပါ။ ဒီလိုအခိုက်အတန့်လေးကတော့ငါဟာသဘာဝအရအောင်မြင်မှုရှိပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့လိင်မှုကိစ္စကိုငါအပြည့်အဝစွမ်းရည်ရှိတယ်လို့သတိမပေးခင်မှာကောင်းကျိုးတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သို့သော်ငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်အချိန်များစွာမလွန်ကဲပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားလိုကဲ့သို့ကြည့်ရှုရင်းငါဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲဟုတွေးနေသည်။
သင်တို့တွင် PMO မှ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကသင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်များအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုရန်နှောင့်ယှက်ခဲ့သလား။ သင်၏မူလ ဦး နှောက်ကခြားနားချက်ကိုမပြောနိုင်သောကြောင့် porn ကြယ်များကိုမိတ်ဖက်များအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ဆိုလိုသည်။ ငါဤသို့လုပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာပျမ်းမျှနှစ်စဉ်အလွဲသုံးစားမှု၊ တစ်နေ့လျှင်ကြိမ်များနှင့်တစ် ဦး တည်းအစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်ကြည့်ရှုခဲ့သောပျမ်းမျှအမျိုးသမီးအရေအတွက်အပေါ် အခြေခံ၍ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုမှရရှိသောအရေအတွက်သည်ကျွန်ုပ်သို့မဟုတ်အခြားကိစ္စရပ်များအတွက်အမှန်တကယ်ရှိသောအမျိုးသမီးအရေအတွက်ကိုအလွန်အမင်းမှေးမှိန်သွားစေပြီးကျွန်ုပ်သည်စစ်မှန်သောလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များတွင်ထပ်မံထည့်သွင်းရန်ပင်မနှောင့်ယှက်ခဲ့ပါ။ ဤတွင်ဖော်ပြထားသည် - အသက် ၂၀ မှ ၃၀ (ပျမ်းမျှတစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်ကြည့်ခြင်း) x (ပျမ်းမျှတစ် ဦး လျှင်မိန်းကလေး ၅ ဦး) x ၃၆၅ x ၁၀ ၃၆၅၀၀ ။ ဒီနံပါတ်ကိုရေးမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကရေးထားတာကအကန့်အသတ်မရှိ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်ကိုရေးဖို့ဖြစ်တယ်။ ၎င်းတွင် PMO အစည်းအဝေးများ၏“ သင့်တော်သောအိမ်ထောင်ဖက်များရှာဖွေခြင်း” ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုခဲ့သောအမျိုးသမီးများစွာမပါဝင်ပါ။ ၎င်းတွင်ထပ်ခါတလဲလဲဗီဒီယိုများနှင့်ထပ်ခါထပ်ခါညစ်ညမ်းသောကြယ်များပါ ၀ င်ခြင်းမရှိပါ။ ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှဘာကြောင့်မအောင်မြင်ရတာလဲဆိုတာကိုငါတွေးမိတာပေါ့။
နံနက်ခင်းစိုက်ခင်းများပျောက်ကွယ်လျက်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့လိင်စိတ်ကိုပြန်မကူးခင်အချိန်ရဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုသာငါသိတယ်။ သတင်းကောင်းကတော့ asap ကိုစတင်လှုပ်ရှားဖို့လှုံ့ဆော်ခံရတာပါ။ PMO TV AND fantasy ကိုသင်လွှတ်လိုက်သည့်အခါတွင်သင်သည်လူမှုရေးနှင့်လုံးဝရူးသွပ်သွားခြင်း မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့ပါ။ “ ယခုပါဝါ” ကိုဝယ်ရန်စာအုပ်ဆိုင်သို့ သွား၍ ထိုနေရာ၌ရှိသောကြက်အချို့သည်အလွန်ကောင်းသည်။
အလွန်ကြီးစွာသော libido ချိန်သီးပတ်ပတ်လည်လှည့်ပုံကိုအံ့သြစရာပါပဲ။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှလိင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးစိတ်ပျက်အားလျော့နေသူများထံမှထုတ်ပယ်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ရှုံးနိမ့်ခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ asexual နီးပါး၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ငါ့ကိုဆက်စောင့်ရှောက်ဖို့တစ်ခုတည်းသောအရာ, ငါ့ဖန်တီးသူ, သဘာဝနှင့် reboot ဖြစ်စဉ်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်၏စနစ်မှစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုရယူခြင်းသည်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုအဖြစ်စတင်သည်။ ခဏကြာတော့ပိုပြီးလွယ်ကူလာတယ်။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏ libido သင့်စိတ်ထဲ၌ပင်, သင့်ထံမှလုံးဝသှားရာမှစတင်သည်သတိပြုမိသည်။ သင်သည်လိင်အလိုဆန္ဒအားလုံးကိုစတင်ဆုံးရှုံးသွားသည်။ အဲဒီအချိန်မှာငါထိတ်လန့်သွားပြီးလိင်တံကိုရလဒ်အနည်းငယ်သာရရှိခဲ့တယ်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကူးယဉ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးစိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ဒါဟာစွမ်းရည်ကိုဆုံးရှုံးနေတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုလိုပါပဲ။ တစ်ချိန်ချိန်ကိုယ့်ကိုလုံးဝလွှတ်လိုက်တယ်။ ငါစိတ်ကူးယဉ်စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖို့ခဲယဉ်းဖြစ်မယ့်လျှင်, ငါအဖြစ်ကောင်းစွာအပန်းဖြေခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ကွယ်ပျောက်ကြကုန်အံ့စေခြင်းငှါ, နေသေးတယ်။ ၎င်းသည်ဘိုက်နှင့် ဦး နှောက်နှစ်ခုလုံးတွင် libido အလွှာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (ကျွန်ုပ်မှ SH * T ကိုကြောက်သည်) ။ ဒါပေမယ့်ငါနောက်ဆုံးပို့စ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲညကအရုဏ်မတိုင်မီအမှောင်ဆုံးဖြစ်သည်။
ဒီနေ့မယုံနိုင်စရာပဲ! ကျွန်တော်မှတ်မိနိုင်သည့်ပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့၊ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်လောက်မှာ၊ လှပသောအမျိုးသမီးများရှိနေခြင်း မှလွဲ၍ လူအများကြားမှာအလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းခံရသည်။ တိရစ္ဆာန်လိုခံစားရတယ် သို့သော်ကောင်းသောလမ်းအတွက်! ငါမြို့သို့ငါ့အ drive ကိုအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုသိသည်။ မိန်းမတစ်ယောက်ပြေးနေတာကိုတွေ့တော့ရုတ်တရက်ကျွန်တော်သွေးထဲစီးဝင်လာတယ်။ ငါလုံးဝစိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်ခဲ့, ဒါကပဲဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါနောက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတွေ့မြင်ပြန်အားကောင်းလာခဲ့သည်။ နောက်ထပ်နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲနှင့်ပိုမိုအားကောင်းနေတုန်းပဲ။ ဘာဖြစ်နေတာလဲ ကျွန်ုပ်အလုပ်သစ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်။ အခန်းထဲတွင်အလွန်ကောင်းမွန်စွာဝတ်စားဆင်ယင်ထားသောအခန်းငယ်များရှိသည်။ တစ်ယောက်ကငါ့ဘေးတွင်ထိုင်နေသည်။ ငါးမိနစ်ခန့်တင်ဆက်မှုတစ်ခုသို့ (ပြတ်ပြတ်သားသားကျွန်ုပ်သည်အာရုံကိုပေးသည်ဟုယုံကြည်သည်) မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်ဘေးကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကသူမဆံပင်နဲ့စကစားခဲ့တယ်။ ငါချက်ချင်းနှိုးဆော်ခြင်းခံခဲ့ရသည် - ငါကမကူညီနိုင်! ကျွန်တော့်အမြင်တွင်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမျိုးသမီး ၅ ဦး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုအမှန်တကယ်သတိပြုမိသည်။ တချို့ကမျက်စိအဆက်အသွယ်လုပ်နေတယ်၊ ငါသူကပြောတယ် baboon တူခံစား! SSHHWWWIINNG ကျွန်တော်မသိခင်၊ ငါတို့မှာ liftoff ရှိတယ် ရယ်စရာကောင်းတာကကျွန်ုပ်ရဲ့စာအုပ်တွေကိုငါ့ရင်ဘတ်ထဲမှာဖုံးအုပ်ရင်းတင်ဆက်မှုတွေကိုလုံလုံလောက်လောက်အာရုံစိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါဖြစ်နိုင်ကာလအတွင်းနာရီဝက်ခန့်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအကြောင်းကိုစုစုပေါင်း 23% 5% စိုက်ထူရှိခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော၊ အမှန်တကယ်အလိုအလျောက်ဖြစ်ခြင်း - မျက်လုံးမှကြည့်ခြင်းနှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံခြင်းမှဖြစ်သည်။ စာအုပ်တွေကခုန်ဆင်းပြီးခုန်ချဖို့လုံလောက်တဲ့ ၈၀% လောက်အထိမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိနိုင်တယ်။ ငါသည်ငါ့ကုလားထိုင်ပြန် scooted နှင့်ရူးသွပ်ဖို့ရှေ့ထိုင်တော်မူ၏။
ငါ PMO စွဲ recoverees အားလုံး PMO နှင့်စိတ်ကူးယဉ်မြောင်း။ မကြောက်ပါနှင့် (ကျွန်ုပ်သည်သေချာသည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်မဖြစ်သင့်ပါ) ။ သင်၏လိင်ကိုပြန်လည်ရှာဖွေပါ။ ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့စွမ်းအားကိုငါခံစားရတယ်။ ၎င်းသည်ငြင်း။ မငြင်းနိုင်၊ ငါအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကူးယဉ်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့အလွန်သွေးဆောင်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီစွမ်းအင်ကိုအားကစားခန်းမထဲယူဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
ကောင်းပြီချိန်သီးပြန်လှည့်နေသည်နှင့် libido နောက်တဖန်နှစ်မြုပ်ခဲ့သည်။ ငါမသေချာမရေရာတဲ့ပုံစံကိုစတင်ကျင့်သုံးနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုတွက်ဖို့ကြိုးစားဖို့အချိန်အများကြီးမဖြုန်းတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ပြaနာမဟုတ်ပေမယ့်အခြားဒိုင်းနမိုက်အတွေ့အကြုံကလမ်းပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတာငါသိတယ်။ ငါရက်ပေါင်း ၉၀ သည်ကောင်းမွန်သောစိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုထင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအခြားရှုထောင့်များကိုလည်းလုပ်ကိုင်ရန်အချိန်ပေးလိမ့်မည်။ အစဉ်မပြတ်ငါဒီကိစ္စနှင့်အတူရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်, ငါလက်ရှိအချိန်တွင်လိင်မဟုတ်ဘဲယခုအချိန်တွင်နေနှင့်ဘဝအားလုံးတွေ့ကြုံခံစားရန်နည်းစနစ်ကျင့်သုံးနေပါတယ်။ ငါဤအမှု၌အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် PMO ထံမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ် minimize အဖြစ်ငါပြောင်းလဲပစ်ရန်ဆက်လက်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွင်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုလုံးဝမရှိတော့ပါ (၉၀) ရက်ထက်နောက်ကျမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ BTW မနေ့ကငါဒီ libido စွမ်းအင်အားလုံးကိုဒိုင်းနမိုက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်စိတ်ကူးယဉ်တော်တော်များများသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ လိင်စိတ်ကြီးမား spikes နှင့်ကြီးမားသောစိတ်ကျနှင့်အတူပတ်ပတ်လည်ခုန်နေသည်။ ကျွန်မအသစ်တစ်ခုကိုမြို့အတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်လူမှုရေးပိုက်လိုင်းသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိုးသွင်းနှင့်အမျိုးသမီးတွေ့ဆုံရန်ဘယ်လောက်ထွက်တွက်ဆဖို့အစွန်းရောက်အရေးတကြီးခံစားနေပါတယ်။ အဲဒီလိုင်းများတလျှောက်တွင်ယနေ့ညအဘို့အနည်းငယ်အတွေးအခေါ်များရှိသည်။
ငါမကြာသေးမီကငါအမျိုးသမီးအာရုံကိုမပါဘဲစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဟာအများကြီးမယူပါဘူး ပရောပရည်လုပ်ခြင်း၊ မျက်လုံးချင်းဆုံခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တိုတိုတုတ်တုတ်စကားပြောဆိုခြင်းတို့သည်အနည်းငယ်သာလှည့်စားနိုင်သည်။ လစ်ဘိုင်ဒါတွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိနေခြင်းကြောင့်ငါဟာယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးနှိုးဆွလာတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေပျောက်ကွယ်သွားတာနဲ့အမျှကျွန်မရဲ့လိင်စိတ်တွန်းအားတွေကိုအများကြီးလျော့နည်းကျဆင်းလာတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ငါဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီးနှိုးဆွသည်ဟုခံစားရလျှင်၊ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးပင်ကိုယ်ဗီဇသည်ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်လိင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုတည်ဆောက်ရန်မဟုတ်ပါ။ ငါသူမကိုကြည့်ရတာပျော်တယ် ကျွန်ုပ်၏ libido မြင့်တက်နေသည့်နေ့ ၄၈ ကဲ့သို့သောနေ့တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်စိုက်ထူမှုအဆင့်အချို့ရလိမ့်မည်။ ဒီနေ့လိုနေ့မျိုးမှာလတ်ဆတ်တဲ့လေကိုရှူရှိုက်မိသလိုခံစားရတယ်။ ဘယ်ကိစ္စမျိုးကိုမှငါစိတ်ကူးယဉ်ဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။ စိတ်ကူးယဉ်ပျောက်ကွယ်မသွားဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါလိုချင်တာကပျောက်သွားပြီလို့ငါထင်တယ်။ ဒါ့အပြင်ငါ့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဆံုးကိုတည်ဆောက်နိုင်စွမ်းဟာသိပ်ပြီးအဆင်မပြေပါဘူး၊ ဒါကြောင့်ကျွန်မအတင်းအကျပ်မနှောင့်ယှက်ပါဘူး။
ငါသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်တစ်လျှောက်လုံးပေါ်နဲ့ off စိုစွတ်သောအိပ်မက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ နံနက်စိုက်ထူအပွောငျးအလဲအတွက်လာနှင့်ကြပြီ။ လောလောဆယ်ကနောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်ဒါနံနက်စိုက်ထူရတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အမျိုးသမီးတွေန်းကျင်ဖြစ်ခြင်းကနေတစ်နေ့တာအတွင်းအလိုအလျောက်စိုက်ထူခဲ့သည့်အခါတောင်မှနေ့က 48 အပေါ်, ကိုယ့်နံနက်စိုက်ထူကြောင်းနံနက်သို့မဟုတ်အောက်ပါတဦးတည်းရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ဒါဟာအလုပ်မှာနေသောဤအင်အားစုအားလုံးရှိပါတယ်ပုံရသည်: စိုက်ထူ, နံနက်စိုက်ထူခြင်း, အော်ဂဇင်မှအော်ဂဇင် / တိုက်တွန်းခြင်း, horniness ၏ခံစားမှုစသည်တို့ကိုငါ rewiring စဉ်အတွင်းခံစားရတယ်အဲဒီတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးရှိခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကအားလုံးကြင်နာ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စည်းချက်မှချီတက်။ ငါ O ကိုရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပေမယ့် horny မဟုတ်ခဲ့ခြင်းနှင့်စိုက်ထူရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါရှိရာကြိမ်ရှိခဲ့သည်။ ငါတကယ် horny ခံစားခဲ့ရနှင့်အောက်ထပ်ဘာမျှမခံစားမိသည့်အချိန်များရှိခဲ့သည်။ ကိုယ့်စိုက်ထူခြင်းနှင့်အတူနိုးနှင့်နေ့က၏ကျန်ပြည့်စုံ flatline အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်မှာရက်ပေါင်းများစွာရှည်လျားသောရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်နေ့ ၁၆ ရက်၊ ရက်ပေါင်း ၂၂ ကနေ ၃၅ ရက်ကြားကအရေးကြီးဆုံးအချိန်ကာလ ၄၈ ကနေအချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှအခြေအနေတွေကပိုပြီးသဟဇာတဖြစ်လာတယ်လို့ပြသခဲ့တယ်။
သတင်းကောင်း၊ အကောင်း - စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွေအားလုံးဟာပထမ ဦး ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်၊ လက်တွေ့ကျပြီး၊ ငါသည်ညစ်ညမ်း Post-porn နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခဲ့သောအမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ ငါမဆိုဆုပ်ကိုင်ခဲကိုအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းနှင့်စိုက်ထူစူပါမာကျောကြီးများကြီးနှင့်ငါနေသမျှကာလပတ်လုံးငါကလိုချင်သလောက်ကြာရှည်; ငါကျိန်းသေကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ခဲ့အိုမှရွေးချယ်ခဲ့သည်။ မကောင်းဘူး၊ ငါအပြည့်အဝမလုပ်ရသေးဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိင်စိတ်နိုးထနေတုန်းပဲခုန်ပေါက်နေတုန်းလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကအတော်လေးနိမ့်နေလို့ပါ။ အလွန်ခဏခဏဖြစ်ပျက်သောနံနက်စိုက်ထူခြင်းနှင့်လုံးဝနီးပါးအလိုအလျောက်မရှိ။ ငါစိတ်မရှည်ရတဲ့ခဲ့စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လက်ဖြင့်ငါ့စိုက်ထူခြင်းနှင့်နောက်ကျ edging ခဲ့ပုံပါဘဲ။ ဒီနေ့ငါအရမ်းကိုနှိုးဆွမခံစားရဘူး။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် MO သို့မဟုတ် PMO ကိုအငြင်းပွားရန်မတိုက်တွန်းခဲ့ပါ။ အိပ်မောကျသောအခိုက်အတန့် မှလွဲ၍ အိုဟန္တာရာသည်မည်သည့်နေရာတွင်မှမရှိချေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအနည်းဆုံး PMOF မရှိဤနေရာမှယနေ့ 90 မှရရန်ကြိုးစားနေပါ၏။ ရက်ပေါင်း ၄၈ နှင့် ၄၉ တို့၏မှော်အတွေ့အကြုံများသည် O. သို့ပြန်သွားပြီးနောက်နှစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောအခြားဆူးကိုတွေ့လိမ့်မည်ဟုလုံးဝမထင်ပါ။ ဒီဟာက ၃ ရက်ကြာလိမ့်မယ်။
(နောက်နေ့) ငါပြန်လာ။ ၎င်းသည်ည ၆၉ တွင် MO တစ်ခုဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီးည ၇၀ တွင်အနည်းငယ်ရုပ်ထွက်ရုပ်ပုံများနှင့်ထိုညတွင်နှစ်ကြိမ် MOEing သို့ ဦး တည်ခဲ့သည်။ သတင်းဆိုး - MO သည်ညစ်ညမ်းသော chaser ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး MO ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်စေသည်။ ငါတကယ်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများကဖွင့်ခံရဖို့ခက်ခဲအောင်ဟောင်းလမ်းကြောင်း၏ခိုင်ခံ့သောခံစားရတယ်နိုင်ပါတယ်။ သတင်းကောင်း - MO ၏စိုက်ထူခြင်းသုံးခုစလုံးသည်အလွန်ခဲယဉ်းပြီးကျွန်ုပ်သည်အလွန်ပေါ့ပါးသောထိတွေ့မှုနှင့်ကာလရှည်ကြာစွာတည်ရှိခဲ့သည့်အမျိုးသမီးများနှင့်ကျွန်ုပ်သည် porn-porn နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးသည်။ ဒါ့အပြင်ဒီ porn ဟာလှည့်ကွက်တစ်ခုလုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အမျိုးသမီးမြည်းပုံတစ်ပုံပဲ။ ငါစိုက်ထူကူညီရန်အလင်းလက်စွဲနှိုးဆွအသုံးပြုခဲ့ရသည်, သော, ငါပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသို့မဟုတ်ဒါလုပ်နေခဲ့ Edge ကနေရလဒ်ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာတကယ့်ကိုရက် ၆၀ ဝန်းကျင်လောက်ကချော်တဲ့ဆင်ခြေလျှောဇာတ်လမ်းပဲ။
ငါသည်ဤသူအပေါင်းတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးလည်းစိုးရိမ်မရဖြစ်၏, ငါသည်ယာယီ numbed သော်လည်းငါစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ငါ့ sensitivity ကိုရသောအခါထက်ချွတ်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိ၏ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ ငါ 48 နှင့် 49 ငါ၏အဒုတိယအကြိမ်ပြန်ဖွင့် (ပထမအမျိုးအစားကယ့်ကိုတစ်ခု extension ကို) တွင်သက်တမ်းတိုးကာလ၏ဘုန်းအသရေကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
မှတ်တမ်းအတွက်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၇၀ မှ ၉၀% ကြားတွင်အနာရောဂါဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြောလိမ့်မည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀၊ ၁၁၀% လိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြaနာရှိနိုင်ကြောင်း၊ ငါ့ကိုဤဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းကကျွန်ုပ်အားပြောသောတူညီသောအသံပင်ဖြစ်သည် ငါမရှိသေးဘူးငါစိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ် ဤတွင်နောက်တဖန်သွား - အဘယ်သူမျှမ PMOF ။ ငါမပေးခင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှာလျှင်ဘာဖြစ်မည်ကိုငါတို့တွေ့လိမ့်မည်။ ငါသူ့ကိုကာရီဇာတစ်ချို့စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ (သို့) လူမှုရေးအဖွဲ့များမရှိသောပတ်ဝန်းကျင်အသစ်သို့အခြေအနေရောက်သည်ကိုမသိရှိပါ။ ငါကသော်လည်းဖြစ်ပျက်စေမည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ကဒ်များကိုမှန်ကန်စွာကစားပါကပြီးပြည့်စုံသောပြန်လည် reboot time သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုရှာတွေ့သည့်အချိန်နှင့်နီးကပ်စွာတိုက်ဆိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်မဘဝကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ရယူနိုင်တော့မည်။ ငါပြည့်စုံသောမေတ္တာဘဝကိုရပါလိမ့်မယ်။ ကာလ။
ငါ၏အ relapse ၏သက်ရောက်မှုပြီးသားကွာနွမ်းနေကြသည်။ အရမ်း arousal ခံစားနေပါတယ်။ ငါအားကစားရုံအတွင်းမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူပရောပရည်နေစဉ်ငါတောင်တစ်ပိုင်းစိုက်ထူတစ်နည်းနည်းရတယ်။ ငါချွေးနှင့် panting နှင့်ငါ့နှလုံးခုန်နှုန်းတက်ဆက်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကငါ့ထံသို့အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ မိုင်ကွာအပန်းဖြေရာမှ, ဒါပေမယ့်သူ့ကိုငါယူငါ့ကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒခံစားခဲ့ရနှင့်ငါ့လိင်တံကျိန်းသေတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ငါရိုးသားစွာငါတော်တော်များများရှိဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမှဝေးတည်းခိုသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင်အတွက်တည်းခိုသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါတကယ်ရက်အနည်းငယ်အကြာအခြားအောင်မြင်မှုအတန်ငယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတကယ်မကောင်းတဲ့ရက်စွဲအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီမိန်းကလေးဟာလူမှုရေးအရအဆင်မပြေမှု၊ သူမသည်တကယ်ဖြေလျှော့ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ငါသူမနှင့်အတူထွက်ခွာသွားသောကြောင့်, ငါကြင်နာနာမကျန်းဖြစ်ငါတကယ်မိန်းမအချို့အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်တယ်ကြောင့်ငါသူမငါနှင့်အတူထွက်ချိတ်ဆက်မယ်လို့ကောင်းသောခံစားမှုရှိခဲ့ပါတယ်ပုံရသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကျော်ကကျွန်တော်တို့ချိန်းတွေ့ခဲ့ကြတာပါ။ သူမဆီကဘာတွေမျှော်လင့်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးသားပါ။ ငါအမျိုးအစားမဟုတ်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပညာမဟုတ်ဘူး။ သော်လည်းအလုံအလောက်ဆွဲဆောင်မှု။ နောက်ပိုင်းတွင်သူမကားထဲတွင်နမ်းခဲ့သည်။ သူမသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှား။ ခုခံတွန်းလှန်သော်လည်းသူမအနေဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည်ငါ့ကိုသူမ၏မျက်နှာနှင့်လက်များအတွက်လက်ခံဘယ်နေရာမှာမဆိုသူမ၏နမ်း / မထိခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါ့ကိုရန်ပုံငွေပိုပေးဖို့လုံလောက်တယ် ငါသူမလက်ကောက်ဝတ်ကိုနမ်းရှုပ်နေရင်တောင်ငါအဲဒီမှာတစ်ဝက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူမဆက်သွားရတော့မယ်၊ ငါ ok ဆိုပါတယ်နှင့်သူမ၏သွားကြကုန်အံ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ငါဆန္ဒရှိသူအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူအပြည့်အဝနှိုးဆွလာပြီ, ဒါပေမယ့်သူကတကယ်တော့ဒါဟာအလွန်အေးအေးဆေးဆေးမဟုတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းအတွက်သရုပ်ဆောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကတစ်လမ်းအတွက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုစဉ်းစားပါ။ ဒါကဖြစ်သင့်သည်အဖြစ်ကောင်းစွာငါ့အဖို့ကြီးမားတဲ့အလှည့် - ချွတ်သည်။ ၎င်းသည်အလှည့်ကျသော်လည်းအချိန်အတန်ကြာစိုက်ထူခြင်းကိုမရပ်တန့်ခဲ့ပါ။ ကောင်းတဲ့စိုက်ထူ lol ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အနည်းငယ်အလှည့်ကျ! ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါတော်တော်လေးပျောက်ကင်းသွားပြီလို့ထင်တယ်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်၏မြို့ဟောင်းမှအခြားမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သည် သူမမြို့ထဲရောက်တဲ့အခါထွက်ချင်တယ်။ ငါတို့ဘယ်လိုသွားလဲကြည့်ကြမယ်။ နေဆဲ Nashville လူမှုရေးပြissueနာကိုဖြေရှင်းရန်အပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ငါရလိမ့်မယ်
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် ၇၈ တွင် - နေ့ ၃၂ ရက်၊ အိုနေ့၊ MO နေ့ ၆၈၊ PM နှင့် MOx78 ရက် ၇၀ တွင်။ Reboot သည်ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးသော်လည်းကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ငါမကြာသေးခင်ကပြန်ဖြစ်လာတော့ငါ့ရည်မှန်းချက်ကိုရက် ၁၀၀ အထိတိုးချဲ့ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအသက် ၉၀ ပြည့်ပြီးလိင်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရလာရင် (ဆက်နွယ်မှုရှိနိုင်တဲ့အရာအချို့ရှိသူတစ် ဦး ဦး နှင့်အတူ) ဒါကိုငါမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။
ငါလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကဒီဘလော့ဂ်ကိုသွားတော့တာပါ၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေ၊ libido ဆန့်ကျင်ဘက်တွေထဲကတစ်ခုတည်းမဟုတ်တာသေချာအောင်အချိန်အနည်းငယ်ပေးချင်ခဲ့တယ်။ လုံးဝမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတောင်းဆိုချက် (lol!) နှင့်အတူလိင်ဇာတ်လမ်းမပါရှိခြင်းအားဖြင့်သင့်အားယောက်ျားများအားစိတ်ဓာတ်မကျစေရန်မရည်ရွယ်ပါ။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်ပျောက်ကင်းသွားသည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ ငါကသဘာဝ virile နှင့် horny ခံစားရတယ်။ ငါ၌အနည်းငယ်မျှသာထိတွေ့မှုနှင့်နမ်းခြင်းများပါဝင်သည့်မကြာသေးမီကလိင်ဆက်ဆံမှုအနည်းငယ် (ဟယ်လိုဝန်းကျင်နှင့်နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေနေ့တို့တွင်) ရှိခဲ့သည်။ နှစ် ဦး စလုံးတိုတိုဖြစ်စဉ်များငါ့ကိုတစ်ခုစီကိုစိုက်ထူအပ်ပေးတော်မူ၏။ တကယ်တော့၊ ဒုတိယတွေ့ဆုံမှုမှာအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနှင့်အဆင်မပြေသောမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်ငါ LOL နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ pecker ကိုပြောပြရန်မေ့နေသည်။ ငါ့ကိုပါးစပ်ဖြင့်နမ်း။ လက်နှင့်မျက်နှာကိုထိရန်သာခွင့်ပြုမည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့် ၈၀% စိုက်ထူခြင်း၊ ထို့အပြင်သူမအရမ်းစာသားလှုပ်ခဲ့သည်ဒါကြောင့်တင်းမာနေခဲ့သည်။ နေ့စွဲကတကယ်တော့တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ သူကကျွန်မအတွက်တကယ်မတော်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကကျွန်တော့်ကိုလန်းဆန်းစေခဲ့တယ်။ ဟုတ်တယ်နဲ့ပထမတစ်ယောက်ကငါတကယ်စိတ်မဝင်စားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ ငါလုံးဝအရက်မူးရိုက်ခတ်နှင့်သူမ၏လက်ကိုကိုင်ပြီးစတင်ခဲ့သည်။ သူမလက်ကိုအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နဲ့လက်ကောက်ဝတ်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ ဒါကကျွန်တော့်ကို ၅၀% စိုက်ထူမှုပေးပြီးကျွန်တော်အရမ်းမူးနေလို့လမ်းလျှောက်လို့မရဘူး။ ကျွန်ုပ်တွင်အလားအလာအသစ်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကို ပို၍ ခိုင်မာသောသက်သေအထောက်အထားများဖြင့်သက်သေပြနိုင်ခြင်းရှိမရှိသေချာအောင်ကျွန်ုပ်အားသေချာစွာအသိပေးပါလိမ့်မည်။ ဒါကဘဝကိုဂရုစိုက်တဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့နိုးထမှာမဟုတ်ဘူး။
ပိုအရေးကြီးတာကစိုက်ထူခြင်းထက်ငါရိုးရှင်းစွာခံစားရတယ်။ ငါနိုးလာပြီလိုခံစားရတယ် ဒီရက် ၉၀-၁၁၁ ရက်ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု (ကောင်းမွန်သောအတိုင်းအတာအတွက်အပြီးသတ်ရေးဆွဲရန်စီစဉ်နေခြင်း) သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမကကျွန်ုပ်တစ်ကိုယ်လုံးအတွက်ပါပြန်လည်နာလန်ထူလာခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကနေပြန်ဖွင့်လိုက်တာကကျွန်တော့်ကို hypersexual, compulsive PMO စွဲလမ်းစေတဲ့ OCD ကြောင့် OCD ဟာကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အခြားရှုထောင့်များစွာကိုထိန်းချုပ် / သက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစေခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ OCD သည်ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးသိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သောအတိတ်ကာလဖြစ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်အခိုက်၌အသကျရှငျ၏တန်ခိုးမှတဆင့်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ငါပဲခံစားရတယ်! ငါလှပသောမိန်းမများပတ်ပတ်လည်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ငါ 90er 110 နှင့်အတူပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်သလား? ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ ငါတစ်နေ့တာအတွင်းအလိုအလျောက်စိုက်ထူရပါသလား? ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါပူနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဘေးမှာရပ်ပြီးငါတစ်ယောက်မရှိဘူးဆိုရင်ငါစိတ်မ ၀ င်စားဘူး။ ငါသာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုစစရမယ်ဆိုရင်တော့ငါခက်မယ်ဆိုတာယုံကြည်စိတ်ချမှုပဲ။ ဇာတ်လမ်း၏အဆုံး။ ED စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည်မှတ်ဥာဏ်၏ဝေးကွာသောမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ဖို့ဘဝဟာတိုတယ် ကျွန်ုပ်၏ penile sensitivity သည်ခေါင်မိုးမှတဆင့်ကျွန်ုပ်စတင်ချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးယဉ်မှုများ (ကျွန်ုပ်စိတ်ကူးယဉ်သည့်အကြိမ်အနည်းငယ်) သည်သဘာဝကျပြီးလုံးဝလက်တွေ့ကျသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သာလျှင်ရနိုင်မည့်ညစ်ညမ်းသည့်နေ့ရက်များတွင်ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောညစ်ညမ်းသောနေ့၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်အသေးစိတ်၊ scripted၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကူးယဉ်မှုများနှင့်လုံးဝမတူပါ။ ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းကို manual ဆွ၏အကူအညီဖြင့်ခက်ခဲ။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါအလုပ်မှာအချိန်အနည်းငယ်ရှိသည်နှင့်ငါဇာတိမြို့မြို့ပြန်ရောက်စဉ်ငါမကြာသေးမီကတွေ့ဆုံခဲ့မိန်းကလေးတစ် ဦး အကြောင်းကိုစိတ်ကူးစတင်ခဲ့သည်။ ငါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့မအကူအညီနဲ့အပြည့်အဝစိုက်ထူပေးရဖို့ 24 မိနစ်မှ7မိနစ်ခန့်စိတ်ကူးယဉ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။ ယခုငါဖြစ်သကဲ့သို့ငါဟန်ဆောင်ဖြစ်ဖို့မဆိုလိုဘူး, နှင့်နေဆဲ reboot စဉ်အတွင်းစိတ်ကူးယဉ် minimize ကိုထောက်ခံသူတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းကို။ ငါ reboot အများစုနှင့်အားလုံးအတူတကွစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာစာလုံးပေါင်းများအတွက်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်စိတ်ကူးယဉ်အရှုံးမပေးဘူးဆိုရင်ငါယခုငါရှိရာဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ငါ့ရဲ့နောက်ဆုံးဘလော့ဂ်ကိုဖတ်တဲ့သူတွေအတွက်ငါမကြာသေးခင်ကပြန်ပြောင်းသွားတယ်။ ငါနောက်ဆုံးသောပူပန်မှုနှင့် MO အချို့ကို ဦး တည်သွားသောနောက်ဆုံးတွင် O (edging) မရှိသော ၀ န်ကြီးချုပ်တစ် ဦး ရှိသည်။ ဒါပေမဲ့၊ ငါ porn ကိုခေါ်တာက bikini မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးမြည်းပုံပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်ကိုကြာကြာမထိခိုက်စေခဲ့ပါဘူး။ ရက် ၇၀ ရက်အကန့်အသတ်မရှိအပြီးတွင်၎င်းသည်သေးငယ်သောစလစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါအဲဒီအချက်အထိလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုလုံးဝမဖျက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ Libido လာမယ့်စုံတွဲတွေအတွက်ပြိုလဲသွားပေမယ့်သိပ်မကြာခင်မှာပဲကျွန်တော့်ရဲ့ခံစားချက်၊
ကိုယ့်လိင်တံကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူး လူတစ် ဦး သည်မလုံခြုံမှုများကြောင့်သို့မဟုတ်သူသည်မိမိ၏ pecker ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းများကိုပင်စားသုံးခြင်းသည်သဘာဝမဟုတ်ပါ။ သငျသညျချစ်ခြင်းမေတ္တာစတင်စတင်နှင့်အရာတစျခုကအခြားနှင့်၎င်း၏အားလုံးပျော်စရာ, အနှောင်ကြိုးအကြောင်းကိုမျှော်လင့်သောသူတို့အားကံကောင်းအနည်းငယ်အဘို့အချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဦး ဆောင်လမ်းပြ!
ငါတကယ်ဒီအကြောင်းအလုံအလောက်မပြောနိုင်ပါ။ ငါဒီဇင်ဘာလ၌ 31 ဖြစ်လိမ့်မည် ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းအောင်နေဖို့၊ အောင်မြင်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတာ၊ အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ထားရှိတာတွေကိုပေါင်းပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ reboot ခရီးကကျွန်တော့်ကိုခွေးတစ်ကောင်လိုဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်လိုခံစားနေစေခဲ့တယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာပိုပြီးပညာရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းပိုရှိလာပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုကမ်းလှမ်းဖို့နောက်ထပ်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ Gary နဲ့ Marnia ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏ကူညီပံ့ပိုးမှုအတွက်နှင့်သင်၏အောင်ပွဲများနှင့်ရုန်းကန်မှုများကိုဝေငှခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ခရီးသူချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါအနိမ့်ကြိမ်နှုန်းမှာ blogging လိမ့်မည်ဖြစ်ပေမယ့်ငါမကြာခဏသင်ယောက်ျားတွေအပေါ်စစ်ဆေးနေပါလိမ့်မယ်။ ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာဘ ၀ တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှမင်းတို့အားလုံးကိုသင့်အား ဆက်၍ အသိပေးပါလိမ့်မည်။
ကောင်းပြီငါနောက်ထပ် update တစ်ခုနှင့်အတူပြန်စစ်ဆေးနေတာပါ။ စိတ်ကျေနပ်မှုရရန်နှင့်သင်၏အူကိုနားထောင်ရန်“ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုကုသနိုင်သည်ဟုထင်သော်လည်းတစ်စုံတစ်ရာကကျွန်ုပ်သည်အချိန်ပိုလိုအပ်သည်ဟုတစ်စုံတစ်ရာကပြောနေခြင်းဖြစ်သည်” ဟုသင်ထဲမှမည်သူမဆိုကိုပြောလိမ့်မည်။ နေ့ ၈၀ ၀ န်းကျင်တွင် MO နှင့်ကျွန်ုပ်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်ပျောက်ကင်းသွားသည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ ငါမှားတယ်လို့မပြောဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကနေငါရှောင်ကြတဲ့အတွက်ငါဝမ်းသာတယ်။ အကြှနျုပျ၏ libido ယခုတသမတ်တည်းတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ငါပို။ ပို။ သဘာဝနှင့်ပြည့်စုံခံစားရတယ်, စာသားသက်တမ်းတိုး။ ငါ့နံနက်စိုက်ထူရူးဖြစ်ကြသည်! ငါသူတို့အဲဒီမှာပဲတော့ဘူးစဉ်းစားကြဘူး။ ငါသည်ငါ့မျက်နှာကိုဆေးကြောခြင်း, သွားတိုက်ခြင်းနှင့်ငါနေဆဲခဲယဉ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါအခြားနေ့ကအလုပ်မှာပတ်ပတ်လည်၌ရပ်နေစဉ်ဤမိန်းကလေးအကြောင်းကိုငါဒုတိယအဘို့ငါသိ၏။ ဒါကိုကျွန်တော်တကယ်နားမလည်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုငါမသိခင်ကငါ့စိုက်ထူမှုကိုဖုံးကွယ်ဖို့ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားနေခဲ့တယ်။ ဤသည်မှာတစ်ခဏသာမဟုတ်၊ တစ်နေ့ပင်မဟုတ်ပါ။ ငါအနည်းဆုံးနောက်ဆုံး 80 သို့မဟုတ်4ရက်ဒီပြည်နယ်အတွက်ပါပြီ။
ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာငါကောင်မလေးအသစ်နဲ့စကားပြောနေမှာပါ ဖြစ်ပျက်မယ့်အရာကိုငါတကယ်မသိဘူး။ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို၊ ယနေ့ ၁၁၀ သို့ဖြစ်နိုင်လျှင် ၁၂၀ သည်ကောင်းမွန်သောအတိုင်းအတာအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်မှာကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး မှလွဲ၍ မည်သူမျှ P၊ M၊ M နှင့် O ကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါတစ်ချိန်ချိန် M ကငါ့အပတ်စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်စီစဉ်ထားကြပေမယ့်ငါလက်ရှိငါ့ reboot အချိန်ကိုဆန့်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနေပါတယ်။
အားကြီးသောယောက်ျားများနေပါ။ ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သူများ၏ဘလော့များနှင့်ပုံပြင်များအတွက်မဟုတ်လျှင်၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှယုံကြည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့် ဦး နှောက်နှင့်ကိုယ်ခန်ဓာလိုအပ်သရွေ့မိမိကိုယ်ကိုအခြားသူများနှင့်မနှိုင်းယှဉ်ပါနှင့်။ တိုးတက်မှု၏စစ်မှန်သောလက္ခဏာများကိုငြင်း။ မရပါ။ သင်ပိုကောင်းလာပြီဆိုတာကိုသင်သိလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သံသယဖြစ်ပါကသင်အချိန်ပိုပေးပါ။ ဒါဟာပြိုင်ပွဲမဟုတ်ဘူး။ ဒါ့အပြင်အမျိုးသမီးတွေကိုလှည့်ပတ်ရမယ်။ ယင်း၏ရုံဖော်ရွေဆက်ဆံရေးရင်တောင်။ ၎င်းသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အားအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိသောမြို့ကိုထွက်သွားလျှင်ပင်။ ဒီ reboot ကကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေအနေနဲ့လူမှုရေးသတ္တ ၀ ါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပဲမောင်းထုတ်လိုက်တာပါ။ Porn သည်အမြဲတမ်းအထီးကျန်ဆန်မှုနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ရန်လှည့်စားနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်သည်။ PMO ဟာရုပ်ပုံပျက်နေပြီဆိုရင်၊ အထူးသဖြင့် PMOF လောက်ဝေးဝေးသွားရင်တော့စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့မင်းကိုရူးသွပ်စွာမောင်းနှင်လိမ့်မယ်။ ဘာဝနာသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏စိတ်ပျက်မှု / လိင်စွမ်းအင်ကိုပိုမိုထိရောက်သောလှုပ်ရှားမှုများသို့ PMO သို့ပေးပို့ရန်သင်ယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည် flatline အဆင့်သို့ရောက်လျှင်၊ စိတ်မပျက်ပါနှင့်၊ ဝမ်းမြောက်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအောင်မြင်မှုအတွက်ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းနီးပြီဆိုတာပါပဲ။ ငါဘယ်သူ့ကိုမှသိသိသာသာ flatline အဆင့်သို့မဟုတ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုမပါဘဲပြန်လည်ကောင်းမွန်ပြီထင်ပါတယ်။ ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသုံးစုစုပေါင်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါ porn မှမသိဘဲစွဲအခါငါ penile ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းစဉ်းစားရန်အသုံးပြုလမ်းလည်းမကြာခဏ masturbating ။ မမှန်ပါဘူး။ ကျိန်းသေခက်ခဲများနှင့်အစဉ်အဆက်ထက်ပိုကြီး / အဖြစ်ကြီးတွေ။ ထိုအခါစိုက်ထူနောက်ဆုံးမှအဘယ်သူမျှမအားပေးမှုကိုအနည်းငယ်သာယူပါ။ အတော်များများကနံနက်ငါသည်ငါ့နံနက်စိုက်ထူနှင့်အတူအိမျတျောကိုလှည့်ပတ်လမ်းလျှောက်ငါသည်ငါ့နံနက်ထုံးတမ်းဖြတ်သန်းသွားသကဲ့သို့အပြည့်အဝနှင့်မြဲမြံစွာကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါအရမ်းရယ်ရတယ်ငါခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်ကိုအဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်တခါတရံတစ်နေ့တာအတွင်းအလိုအလျောက်စိုက်ထူရ! ငါတစ်ခါတစ်ရံလိင်စိတ်ရုံနာမငြိမ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပါဘဲ။ ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ PMO စွဲ၏ပြဿနာယောက်ျားတွေအများကြီးများအတွက် Over-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုလည်းကပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ လူတိုင်းမဒီအပေါ်ငါနှင့်အတူအသဘောတူငါကအရမ်း Debate ကြောင်းသဘောတူသည်။ သို့သော်ငါအဘို့, reboot ကာလအတွင်းက M အနေဖြင့်လုံးဝရှောင်မရှိမဖြစ်ခဲ့ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ယခုမှာငါသည်ငါ၏အသက်ရှင်ခြင်းသို့ကြောင့်ပြန်လည်ထိတွေ့ပေါ်လွင်လာကြပြီ, ငါကအရမ်းကွာခဏကလုပ်ပါ။ အဆိုပါရလဒ်တသမတ်တည်းပိုကောင်းစိုက်ထူအရည်အသွေး, နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခဲ့သည်။ sensitivity နှင့် arousal မတိုင်မီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နေ့ညဉ့်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ငါယခုသင်သိရတဲ့ penile ဒဏ်ရာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး
ကျွန်တော့်သက်တမ်းတိုးလိင်စိတ်ကအငြင်းပွားနေတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်ဘဝ၏ဖိစီးမှုအများဆုံးအလုပ်ရက်သတ္တပတ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက် ၁၂ နာရီအဆိုင်းသို့ပြန်ကျောထောက်နောက်ခံပြုရမည့်အရာသည်ငါဖော်ပြရန်စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာနှင့်ပြည့်နေသော ၁၃ နာရီအပြောင်းအလဲများသို့နောက်ကျောသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ အရမ်းပင်ပန်း, တက်ရိုက်တယ်, pissed ။ သို့သော်စိတ်ဖိစီးမှုများရှိသော်လည်းနံနက်တိုင်းစိုက်ထူမှုများသည်မနက်တိုင်း၌များစွာရှိခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောသုံးရက်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်အလွန်တရာမှသဘာဝအရချိုင့်ဝှမ်းကိုခံစားခဲ့ရသည်။ တစ်နေ့တာအတွင်းအလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်း (ထိုင်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အလွန်အဆင်မပြေနိုင်သည့်အခြေအနေ) ။
ငါအနည်းငယ်အမျိုးသမီးများနှင့်စကားပြောနေပါတယ်။ ဒီမိန်းကလေးတစ် ဦး တစ်ယောက်အိပ်ရာဝင်လျှင်မြန်လိမ့်မယ်မထင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဒီအချိန်မှာငါအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာသံသယမရှိပါဘူး။ ချိုချိုသာသာနဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့လိင်မဆက်ဆံတာဟာအရမ်းကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ သို့သော်၊ ထိုနေရာသည် reboot ပြီးနောက်ဘဝပြေလည်သွားသည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်၌သဘာဝသို့မဟုတ်ကျန်းမာသောထွက်ပေါက်မရှိလျှင်လိင်စွမ်းအင်ကိုလမ်းကြောင်းနှင့်လမ်းကြောင်းပြောင်းရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးပါသောစွမ်းအင်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်စိတ်ရှိခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ရှုခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ ပုံဥပမာအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်ရန်ထက်မြို့ပေါ်သို့သွားရန် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ငါရိုးသားစွာငါနောက်တဖန် porn သို့အရှုံးပေးလိမ့်မည်ဟုမထင်ကြဘူး။ ငါ၏အအကောင်းဆုံး MO / O အချိန်ဇယားကိုထုတ်ရှာဖွေနေအပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအမှန်တကယ်ခံစားနေရသည်။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံး MO မှပြန်လည်ရယူရန်မှာကြာမြင့်စွာမယူခဲ့ဖူးကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါက၎င်း၏အကြောင်းကိုတစ်ပါတ်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲခဲ့ထင်ပါတယ်။ ငါစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာကငါဟာနာကျင်တဲ့ခက်ခဲတဲ့စိုက်ထူ / အပြာရောင်ဘောလုံးတွေကိုငါမဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ရင်ငါမှာမိန်းမမရှိဘူး။ ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုလမ်းပြအဖြစ်မသုံးနိုင်ပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ယောက်အတွက်တော့သူတို့ကိုငါမကြာခဏတွေ့ရတယ်။
အဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူကနှေးကွေးတာ။ ငါပြောမယ်လို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုမကြိုက်ဘူး”
နေ့ 150 +
ငါ 150 + နေ့ရက်ကာလအဘို့ porn ၏ချွတ်ဖြစ်ရပြီနှင့်အချိန်ဖြတ်သန်းအဖြစ်နေဆဲတိုးတက်မှုကိုသတိပွုမိပါပွီ။ ဒါကကောင်းသောအရာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်လည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနေဆဲပင်ယခုလှပ်ခံကြောင်းဆိုလိုသည်။
reboot ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်ငါအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လုပ်နေတယ်။ ငါ့ရည်းစားနဲ့ငါထွက်ခွာသွားတဲ့အခါ၊ caress လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာငါခဲယဉ်းစွာခဲယဉ်းပြီးပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကြာရှည်ခံတယ်။ ငါတကယ်ပဲတော့ဘူး penile function ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ကြပါဘူး။ ငါလေးနာရီကြာအိပ်ပြီးနောက်ငါနှိုးစက်နာရီအားဖြင့်နိုးသောအခါငါနံနက်တိုင်းသစ်တောတော်တော်လေးများသောအားဖြင့်နံနက်တိုင်းကလွဲပြီး တစ်နေ့တာတစ်လျှောက်လုံးအလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ယခုပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ MO'ing ကိုအခြေခံပြီး MO အတွက်စံပြအချိန်ဇယားကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် persistent စိုက်ထူခြင်းနှင့်စွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသောခံစားချက်ရှိမှသာလျှင်။ ကျွန်မရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတစ်ယောက်တည်းနေပြီးဝေးကွာစွာဝေးကွာသောဆက်ဆံရေးတွင်ရှိနေခြင်းသည်နောက်ဆုံးတွင် MO'ing သို့တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ခန့်ပြုတ်ကျသွားသည်။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သည်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်သည်၊ နှိုးဆွမှုစတင်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်သာရှိသည်။ ထို့နောက်ငါအာရုံခံစားမှုအပေါ်အဓိကအာရုံစိုက်နေစဉ်ငါအလွယ်တကူ MO နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ့သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကိုလည်းငါပိုပြီးထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့လည်းခံစားရတယ်။ ငါနဲ့တူတူငါအော်ဂဇင်နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်အတိအကျလျှင်ငါရွေးချယ်နိုင်သည်။ တစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်ပြုပြင်ထားသော libido ကို“ တရားဝင်” စစ်ဆေးရန်အခွင့်အလမ်းမရှိသေးသော်လည်းစိတ်ပျက်မိကြောင်း၊ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်တိုးတက်မှုများကိုအမှန်တကယ်တွေ့ကြုံနေရသောကြောင့်ဤတိုးချဲ့ကာလကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအတွက်နောင်တမရပါ။ ပိုကောင်းလာတယ်။ ငါက၎င်း၏ရယ်စရာယခုအမျိုးသမီးများန်းကျင်ဤမျှလောက်ယုံကြည်မှုဖြစ်၏။ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပေမယ့်အေးဆေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ခံစားမှုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သဘာဝတရား၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရိပ်အယောင်ဟောင်းများသည်ကျွန်ုပ်ကိုယခုဖွင့်စေသောအရာဖြစ်သည် (အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ဆံပင်ကိုလှန်လိုက်သည်၊ လှလှပပလှပသောလှပသောခြေလက်များဖြင့်လမ်းလျှောက်သည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ပြုံးသည်ကဲ့သို့) ညစ်ညမ်းသည့်နေ့ရက်များကုန်ဆုံးသွားပြီးကျွန်ုပ်၏စိတ်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှာပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။
နေ့ 170 +
ကျွန်တော့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကနောက်ဆုံးတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခဲ့တယ်။ သုံးပတ်ကြာ MO မရှိသော F နှင့်အနည်းဆုံး F (ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ဤအချက်ကို P မပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်) ပြီးနောက်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်အတူ ၅ ရက်ကြာအလုပ်နားခဲ့သည်။ ငါအရမ်းနောက်ကျသွားပြီဖြစ်သောကြောင့်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူသူမမတ်တပ်ရပ်နေသောကြောင့်ဒါဟာတကယ်ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားပါပဲ။ ဒီပုံပြင်ဟာရှည်လျားတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ကျွန်တော်ထွက်ခွာတဲ့နေ့နောက်ဆုံးမိနစ်မှာအကြီးအကျယ်မှားယွင်းတဲ့စကားပြောဆိုမှုအမှားနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဟာစိတ်မသက်မသာဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လိင်မဆက်ဆံမီ၊ အထူးသဖြင့်မကြာသေးခင်ကမှအောင်မြင်မှုမရခဲ့လို့ပါ။ ဒါ့အပြင်လင်းနို့ခွေးနားကခွေးအိမ်ထဲမှာကျွန်တော်ရောက်နေတယ်၊ ​​ငါတို့လာလည်မယ်ဆိုတာအတိအကျမသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတောင်းပန်ခြင်းနှင့်အမြန်ဆုံးသူမ၏နှင့်သူမ၏မိတ်ဆွေများကမှတက်စေရန်ကမ်းလှမ်းမှုမှတဆင့်အမှုအရာချောမွေ့နိုင်ခဲ့သည်။
ငါနေမကောင်း Chase မှဖြတ်ပုံပါဘဲ။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံမှုအကြိမ်မည်မျှလွန်ခဲ့သည်၊ (၅) ရက်အတွင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်အချိန်ကုန်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မမှတ်မိနိုင်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်လုံးဝခြိမ်းခြောက်နေသောလိင်ဆိုင်ရာအစာစားချင်စိတ်ရှိသောကျွန်ုပ်၏ ၂၁ နှစ်ရွယ်ရည်းစားဟောင်းကို ၀ တ်ဆင်ရန်လုံလောက်ပါသည်။ ) ။ ဒါဟာ clunky မျိုးကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ပထမညကကျွန်မစက္ကန့် ၂၀ လောက်အကြာမှာတစ်ကြိမ်၊ နောက် ၁၅ မိနစ်ခန့်အကြာမှာ ၂ မိနစ်ခန့်အကြာမှာကျွန်တော် PE တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါသူမ၏ပါးစပ်နှင့်အတူသူမ၏ချွတ်လက်စသတ်။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာငါတို့လိင်ဆက်ဆံပြီး ၅ မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ မနက်စာစားပြီးတဲ့နောက်မှာငါတို့ဟာနောက်တစ်ခါလိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီး ၅ မိနစ်လောက်ထပ်ကြာခဲ့သည်။ မိနစ် ၂၀ လောက်အကြာမှာငါတို့ဟာနောက်တစ်ခါလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ငါမိနစ် ၃၀ လောက်ကြာခဲ့ပြီးသူမအကြိမ်ကြိမ်လာခဲ့တယ်။ သူမသည်သူမပြုသောအမှုနှင့်ငါမပြီးဆုံးသေးသည်ကိုပြောသောအချိန်တွင်ငါတကယ်ရပ်တန့်ခဲ့သည် (နောက်ဆုံးတွင်အော်ဂဇင်မဟုတ်သောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုရချင်သည်) ။ ထိုညတွင်သူမကသူမငြီးငွေ့နေကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ကိစ္စကိုမပြုလုပ်ခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောပြီးသော်လည်းနောက်တစ်ခါလိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြန်ရောက်လာသည်။ နောက်တဖန်ပါးစပ်နှင့်အတူသူမ၏ချွတ်ပြီးစီး။
နောက်တစ်နေ့တွင်သူမကျောင်းမတက်မီကျောင်းသို့သွားခဲ့သည်။ စကားမစပ်တစ်အရူးစိုက်ထူနှင့်အတူနိုး။ သူမသည်ကျောင်းမှပြန်လာပြီးတစ်နေ့လုံးလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့သည်။ အိမ်ပြန်လာပြီးနှစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာဒုတိယအကြိမ် - သူမ၏အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရန်လုံလောက်သော နောက်တစ်နေ့တွင်သူမစောစောစီးစီးထွက်သွားပြီးနောက်မှသူမကိုမတွေ့ရတော့ပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့လိင်ကိစ္စမရှိဘဲတစ်ရက်သွားခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးသောနေ့၌အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ် (နောက်ဆုံးမိနစ် ၃၀ ခန့်ကြာမှသူမ၏အော်ဂဇင်ကိုဖြစ်စေသည်) နောက်တစ်ကြိမ်တိုးမြှင့်ခြင်းမှအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါထပ်ခါထပ်မံအားသွင်းခဲ့ရသည်။ မိနစ် ၄၀ ခန့်အကြာတွင်နောက်ဆုံးမွေ့ရာသည်မွေ့ရာကိုထောင့်မှထုပ်များကိုချောက်လိုက်သောအခါပြတ်တောက်သွားခဲ့သည်။ ငါအိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံးကြောင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအကြောင်းအရာခဲ့ကြသည်မှာအမှတ်မှာဆေးလိပ်ဖြတ်။
ငါတို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဟာလိင်ကိစ္စနဲ့မပတ်သက်ဘူး၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ စျေးဝယ်ခြင်းစသည်တို့ကဲ့သို့သောအခြားအရာများကိုလုပ်ဖို့စိတ်ကူးရသောအချိန်ကောင်းသည်။ ငါသာလျှင်မကြာခဏစိတ်ကူးယဉ်မိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မနှစ်သက်ကြဘူး၊
ကျွန်မသည် non-orgasm လိင်မှာအကြှနျုပျ၏ attemt အတွက်မအောင်မြင်သော်လည်းမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို, ငါသည်စံလိင်နှင့်အတူအတော်လေးကောင်းစွာဆက်ခံခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်နောက်ဆုံးသောကာလ climaxing မဟုတ်ပြီးနောက်တော်တော်လေးကောင်းသောခံစားရတယ်။ ယင်းချ-ခြမ်းတွင်အချို့သိသိသာသာရာသီအလိုက်ဓာတ်နှင့်ရောရှိသမျှသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့အော်ဂဇင်, ဒီအချိန်အားလုံးစဉ်ကာလအတွင်းအိပ်ငါ့ကိုနီးပါးနိုင်ခြင်းပြန်ဆို။ ဒါနဲ့အတော်လေးအတန်ငယ်ဖြစ်၏။
အတိုချုပ်ပြောရရင်ကျွန်တော် reboot စလုပ်ကတည်းကရက်ပေါင်း ၁၇၀ ကျော်သွားပြီ။ ၈၅ ရက်အကြာတွင်အနိမ့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းဖြင့် M'ing ကိုစတင်ခဲ့သည်။ တစ်လ (ပြီးခဲ့သည့်လ) ခန့်လုံးလုံး M ကိုဖြတ်တောက်ပါ။ ယခုလအစောပိုင်းက PE ပြproblemsနာအချို့ရှိသည်။ MO နှင့် F. ကိုဆက်လက်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းယခုကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်အစစ်အမှန်လိင်နှင့်လုံလောက်သောကြိုးများတပ်ဆင်ထားပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာယောက်ျားတွေအတွက်ဆွဲပါနှင့်အရှုံးမပေးပါ။ ဒီပစ္စည်းပစ္စယအလုပ်လုပ်! ယုံပါ။ ငါအော်ဂဇင်မရှိဘဲကြာရှည်စွာနေထိုင်နိုင်ပြီး O. မရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်အရာများကိုနှေးကွေးအောင်ဆက်လက်ကြိုးစားနေသည်။ ၎င်းသည်ရှည်လျားသောလမ်းဖြစ်သော်လည်းအလွန်ပျော်စရာကောင်းသောလမ်းဖြစ်သည်။ အားတင်းထားသည်!
အားလုံးမင်္ဂလာပါ! ငါ rebalancing site ကိုထဲကအတော်လေးခဏဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘဝနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသာချစ်မြတ်နိုးရန်အကြောင်းပြချက်ကြီးကြီးမားမားမရှိပါ။ သင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေကြောင်းသေချာစေရန်ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းကိုသာလုပ်ပါ။ ငါအတူတူပင်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ယခု ၁၀ လကြာတွေ့နေသည်။ လိင်သည်စိတ်ကိုမှောက်မှားစေသောကြောင့်နေ့တိုင်းပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောစိုက်ထူမှုများကဘာလဲလို့ငါ့ကိုမေးရင်ငါတစ်နှစ်ကျော်အပြစ်လုပ်ပြီးမကောင်းတာကိုကြည့်ပြီး ၁၀ လအကြာငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးကတည်းကလုပ်ခဲ့တာလို့ပြောလိုက်ရုံပဲ။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၂ ​​နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်အသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီ၊ ခြေရာခံ athelete၊ အိပ်ရာပေါ်ရှိမိန်းကလေး။ ငါ cum ယောနိကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ အဲဒါကငါနဲ့အတူအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်၊ ကျနော်တို့တရားဝင်တရားဝင်မရှိသေးဘူး။ သူမသည် ၃ ရက်မှ ၇ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိလေ့ရှိသည်။ ဤလည်ပတ်မှုများအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင် ၃ ကြိမ်မှ ၆ ကြိမ်အကြားလိင်ဆက်ဆံကြရသည်။ ငါ karrezza နှင့်စပ်လျဉ်း, မျိုးစပ်ချဉ်းကပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သို့ Non- အော်ဂဇင်လိင်လှုပ်ရှားမှုများရောနှော, ကြပြီ။ လိင်ဖြစ်သကဲ့သို့ငါနေဆဲ coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အသစ်အဆန်း၏သှေးဆောငျမှအောင်မြင်စွာငါဖြစ်၏။
ကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒနှင့်အလိုဆန္ဒလျော့လာသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်လာသည်။ ကံကောင်းတာကဒီအလေ့အကျင့်ကငါ့စိုက်ထူမှုကပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်ပိုပြီးအကျပ်ကိုင်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပေမယ့်ငါအိပ်ရာထဲမှာအမြဲတမ်းနေပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကို cumming မလုပ်မိအောင်သူမရဲ့ cum ကိုအရူးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်။ ငါသန္ဓေတည်ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲသုတ်ရည်လွှတ်မှုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ဖူးပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးနောက်မှာလိင်ဆက်ဆံဖို့ချက်ချင်းပြန်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါစာသားနာရီကြာနိုင်ပါတယ်။ ငါဝါကြွားဖို့ကြိုးစားနေမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ငါအားလုံး PMO အလုပ်မလုပ်ကြောင်းအားလုံးသင်တို့ကိုစိတ်ချဖို့ကြိုးစားနေတာပဲ !! ငါသည်သင်တို့ကိုမဆိုကဲ့သို့ချွတ်အဖြစ်မကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူနောက်တဖန်အရနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတွေးမိတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့သည်။ preformance စိုးရိမ်စိတ်, သွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်း, လိင်တံဆေးပြား, testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့် .. BULLSHIT !! နှစ်ပေါင်းများစွာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသူများ၊ ကာလဖြစ်သည်။ အဲဒီအချိန်ကတည်းကလိင်ဟာဒီလောက်ကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတာငါသိရင်ငါကွန်ပျူတာကိုပြတင်းပေါက်ကနေထုတ်ပစ်လိုက်လိမ့်မယ်။ မည်သူမဆိုအကြံဥာဏ်အချို့လိုအပ်သည် (သို့) မီးတောက်လောင်နေသောအခြားသူနှင့်စကားပြောလိုပါကဖိုရမ်ကိုပုံမှန်ပုံမှန်စစ်ဆေးနေမည်။
Blog သို့ LINK